လင်္ကာ: စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ကွန် မင့်တွေ
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ကွန် မင့်တွေ
ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဦးညွတ်ဆဲပါပဲ (၁) Feb 20, 2012 03:25 PM
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်
၁၉၉၁ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ ရော်နယ်အောင်နိုင်၊ သံချောင်း၊ မျိုးဝင်းအပါအဝင် အာဏာရူးတစုက အေဘီမြောက်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအဝင် ကျောင်းသားရဲဘော် ၁၀ဝ ကျော်ကို ထောက်လှမ်းရေးလို့ မမှန်မကန် စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်တဲ့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်စက်ပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့လို့ ကျောင်းသားရဲဘော် ၃၈ ဦး ကျဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အကျည်းတန် ဖြစ်ရပ်တွေဟာ တကယ် ဖြစ်ခဲ့တာကို အလွန့်အလွန် ကြေကွဲစွာနဲ့ လက်ခံလိုက်ရပါပြီ။
ABSDF မြောက်ပိုင်း ညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေမှာ ကိုယ်တိုင် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီး ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ကာယကံရှင်တွေရဲ့ တင်ပြချက်တွေကို ဖတ်နေစဉ် တန်းလန်းမှာ၊ အသံဖိုင်တွေကို နားထောင်နေစဉ် တန်းလန်းမှာ "စစ်အုပ်စုက ABSDF ကို နာမည်ဖျက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်း ဖန်တီးပြီး မမှန်သတင်း လွှင့်တာပါ၊ ကောလာဟလတွေပါ" လို့ မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေဟာ တစစီ ကြေမွသွားခဲ့ပါပြီ။
ကျောင်းသားတပ်မတော်အတွင်းက ရော်နယ်အောင်နိုင်၊ သံချောင်း၊ မျိုးဝင်းအပါအဝင် အာဏာရူးတစုဟာ အာဏာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး မူလ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ မူဝါဒတွေ၊ သဘောထားတွေ၊ အစဉ်အလာတွေထဲမှာ အစဉ်အမြဲ အရေးအပါဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ပြဒါးတလမ်း၊ သံတလမ်း ဖြစ်နေတဲ့ ကမ်းကုန်အောင် ရက်စက်လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေဟာ ပကတိဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်တာကို နှလုံးသားက လက်မခံချင်ပေမယ့် ဦးနှောက်က လက်ခံလိုက်ရပါပြီ။
ဘယ်တုန်းကမှ မထင်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားချင်း "တော်တော်လေး ယုတ်ယုတ်မာမာနဲ့ အောက်တန်းကျကျလုပ်တဲ့ အာဏာလုပွဲ" ကြောင့် သွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့ အတိတ်ဆိုးကြီးဟာ အေဘီချစ်သူတွေရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်တွေကို နေ့ရောညပါ ချေမွှနေပါပြီ။
ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဦးညွတ်ဆဲပါပဲ (၂) Feb 20, 2012 03:25 PM
ဒါပေမယ့် အေဘီချစ်သူတွေ အနေနဲ့ ဒီ တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးဟာ ABSDF တခုလုံးရဲ့ မူဝါဒ၊ သဘောထား မဟုတ်ဘဲ ABSDF အတွင်းက အာဏာရူးတစုရဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ ရမ်းကားမှုသာ ဖြစ်တာကို ကွဲကွဲပြားပြား မြင်နိုင်စွမ်းတော့ ရှိကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အေဘီသမိုင်းကို သေသေချာချာ သိရှိပြီး တန်ဖိုးထားသူတွေရဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို တသက်လုံး လေးစားလာခဲ့တဲ့၊ ချစ်မြတ်နိုးလာခဲ့တဲ့ စိတ်ကို ဒီ မြောက်ပိုင်း သွေးချောင်းစီးမှုကြီးက ဗြောင်းဗြန်လှန် မပစ်နိုင်ရုံမက ဆံတချည်မှတောင် လျော့မသွားတဲ့ လေးစား မြတ်နိုးမှုမျိုးနဲ့ အရင်လိုပဲ ဆက်လက် လေးစား မြတ်နိုးနေကြဆဲပါ။
ဒီ တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးဟာ တကယ် ဖြစ်ခဲ့တာကို ခိုင်ခိုင်မာမာ သိလိုက်ရပြီးတဲ့ အချိန်မှာလည်း အေဘီချစ်သူတွေဟာ အသက်၊ သွေး၊ ချွေးတွေနဲ့ ပေးဆပ်သွားခဲ့ကြတဲ့၊ ပေးဆပ်နေကြတဲ့ အေဘီရဲဘော်တွေရဲ့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတွေ အပေါ်မှာ အရင်လိုပဲ အသိအမှတ်ပြုနေကြဆဲပါ။
အေဘီချစ်သူတွေဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ ထွန်းပြောင်လာခဲ့တဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာကို ရင်ထဲမှာ တသက်လုံး သိမ်းဆည်းသွားပြီး ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်တွေရဲ့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတွေ အတွက် တသက်လုံး ဦးညွတ်သွားကြမှာပါ။
ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဦးညွတ်ဆဲပါပဲ (၃) Feb 20, 2012 03:26 PM
ABSDF ဟာ ဗကသ အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီး ရပ်တည်လာတဲ့ ကျောင်းသားတပ်ဦး ဖြစ်လို့ ဗကသ ကို အလွန် ကြောက်တဲ့ စစ်အုပ်စုက ABSDF စတင် မွေးဖွားလာတဲ့ အချိန်က စပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖြိုခွဲ ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့တာပါ။
အခုလို အေဘီမြောက်ပိုင်း ရက်ရက်စက်စက် ညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကို ကိုယ်တိုင် ခံခဲ့ရသူတွေနဲ့အတူ တာဝန်သိ အေဘီ ရဲဘော်ဟောင်းတွေ၊ တာဝန်သိပြည်သူတွေက ဝိုင်းဝန်း ဖော်ထုတ်နေကြတာကို ရန်သူ စစ်အုပ်စုဖက်က အခွင့်ကောင်းယူပြီး ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းပြီး အေဘီ ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်အောင် တိုက်ခိုက်လာနေပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ မတရားမှုတွေ၊ နိုင့်ထက်စီးနင်း လုပ်ရပ်တွေ၊ ယုတ်မာရက်စက်မှုတွေကို မုန်းတီးရွံရှာတတ်တဲ့ ရိုးသားတဲ့ သာမန် ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်အထာကို သိတဲ့ ရန်သူ စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ပါးစေတွေဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော် အတွင်းက ယုတ်မာရက်စက်တဲ့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ မတရားမှုတွေ၊ နိုင့်ထက်စီးနင်း လုပ်ရပ်တွေ၊ ယုတ်မာရက်စက်မှုတွေကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ကို ဆွပေးပြီး ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို လုံးဝ ဖျက်သိမ်းဖို့အထိ ဝါဒဖြန့် လှုံ့ဆော်လာနေပါတယ်။
အဲဒီလို ရန်သူ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့် အေဘီသမိုင်းကို လုံးဝ မသိတဲ့ သာမန် ပြည်သူ တချို့ဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော် ဆိုတဲ့ အဖွဲအစည်း နဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ထဲက လူရမ်းကားတစုကို ခွဲခြားပြီး မမြင်နိုင်ကြတော့တဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာနေပါတယ်။
ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဦးညွတ်ဆဲပါပဲ (၄) Feb 20, 2012 03:27 PM
အဲဒီလို အနေအထားမှာ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အဖတ်ဆယ်နိုင်ဖို့ လုပ်ရမယ့် တခုတည်းသော လမ်းကြောင်းက ကျောင်းသားတပ်မတော် သမိုင်းကို ရိုင်းစေခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်အတွင်းက သွေးဆိုးပြည်ပုပ်တွေကို လုံးဝ ကင်းစင်အောင် ညှစ်ထုတ်ဖို့ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်သူ စစ်အုပ်စုရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ ဖြစ်တဲ့ သမိုင်းကို လိမ်တာ၊ သမိုင်းကို ဖျောက်တာ၊ သမိုင်းကို မှေးမှိန်အောင် လုပ်တာမျိုးတွေကို လုံးဝ မလုပ်ဘဲ လူမဆန်စွာ နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်မှုကြီးတွေကို ABSDF အလံတော်အောက်မှာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ABSDF အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို လက်မ မကောင်း လက်မ၊ ခြေမ မကောင်း ခြေမ ဖော်ထုတ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထောက်လှမ်းရေး လို့ မမှန်မကန် စွပ်စွဲပြီး သမိုင်းအဖျက်ခံထားရတဲ့ အေဘီမြောက်ပိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအဝင် ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အေဘီ ရဲဘော် ၃၈ ဦး အပါအဝင် အေဘီ ရဲဘော် ၁၀ဝ ကျော်ရဲ့ သမိုင်းမှန်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တရားဝင် မှတ်တမ်းတင်ပေးပြီး သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည် အရောင်တင်ပေးရမှာကို သမိုင်းပေးတာဝန်အဖြစ် ခံယူကြရပါမယ်။
အေဘီမြောက်ပိုင်း ငရဲခန်းတွေဟာ ABSDF သမိုင်း နဲ့ AB ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုသာမက မြန်မာ့သမိုင်း နဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပါ အမဲစက် စွန်းစေခဲ့တဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြီး ဖြစ်တာကြောင့် အေဘီမြောက်ပိုင်း ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးရဲ့ သမိုင်းမှန်ကို မျိုးဆက်သစ်တွေ သင်ခန်းစာယူနိုင်စေဖို့အတွက် သမိုင်းမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြန်ရေးရာမှာ အေဘီ ရဲဘော်ဟောင်းတွေ၊ လက်ရှိ အေဘီ ရဲဘော်တွေသာမက ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေ၊ သမိုင်းပညာရှင်တွေ၊ ဥပဒေပညာရှင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူထုလူတန်းစား အသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုသူတွေ၊ ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုသူတွေ အပါအဝင် တာဝန်သိပြည်သူတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင် ဆွေးနွေး အကြံပြုနိုင်ဖို့ အေဘီ မြောက်ပိုင်း သမိုင်းမှန် ဖော်ထုတ်ရေးကို ဦးဆောင်နေသူများက ကော်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်းကာ ကော်မတီ အနေနဲ့ စီစဉ်ပေးပြီး အကြံပြုချက်တွေကို လေးလေးနက်နက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားပြီး အားလုံးက ရိုးရိုးသားသား ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဦးညွတ်ဆဲပါပဲ (၅) Feb 20, 2012 03:27 PM
ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ ထွန်းပြောင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းကို သတိရကြ။
ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ကြ။
အေဘီ မြောက်ပိုင်း သမိုင်းမှန်ကို ဖော်ထုတ်ကြ။
ရန်သူ စစ်အုပ်စုရဲ့ သပ်လျှိုမှုကို ဆန့်ကျင်ကြ။
အေဘီမြောက်ပိုင်းက လူမဆန်စွာ ညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေမှာ ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍကမှ မပါဝင် မပတ်သက်ခဲ့တဲ့
ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းများ၊ လက်ရှိ ABSDF ရဲဘော်များ အားလုံးကို အလေးပြုလျက် -
Anonymous Feb 20, 2012 03:48 PM
အေဘီချစ်သူပြောသွားတာကို သဘောတူပါတယ်။ ကျွန်မလဲ အစကစိုးရိမ်နေတာ။ မငယ်နိုင်တို့လို အေဘီဟောင်းတွေအနေနဲ့ ဒီမြောက်ပိုင်းလုပ်ရပ်တွေကို လက်မခံနိုင်ပေမယ့် အေဘီ အဖွဲ့ကြီးပြိုကွဲမှာစိုးလို့ ဘာလို့နဲ့ လက်ရှောင်နေမှာစိုးတယ်။ တဖက်ကလဲ မငယ်နိုင်က အမြဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောတတ်တော့ အဲလိုလူစားမျိုး မဟုတ်မှန်းလဲသိတယ်။ အမှန်တကယ်က အေဘီချစ်သူ ပြောသွားသလိုပါပဲ။ လူတစုလုပ်ရပ်နဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်က ကွာပါတယ်။ အဖွဲ့ပြိုကွဲသွားမှာစိုးလို့ နာမည်ပျက်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအအကြောင်း မဖော်ထုတ်ရင် အသက်စွန့်သွားခဲ့တဲ့ သူတွေအပေါ် တကယ်ကို မတရားရာရောက်ပါတယ်။ အခုလို အေဘီဟောင်းတွေအနေနဲ့ အမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာအရမ်းကောင်း တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျေးဇူး။
Anonymous Feb 21, 2012 05:25 AM
ABSDF ကို အရမ်းစိတ်ပျက်တယ်
mgdown Feb 21, 2012 07:37 AM
ခွေးဟောင်တိုင်းထရင်အိပ်ရေးပျက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် ကိစ္စကိုကိုယ်အောင် မြင်အောင်အကောင်အထည်ဖော်ကြပါ ခင်ဗျာ။
Anonymous Feb 24, 2012 09:32 AM
စစ်မုန်း Feb 24, 2012 03:11 PM
Anonymous (February 22, 2012 12:25 AM) သို့
မင်းက Myanmar Astronomy ဘလော့မှာ Nge Naing နာမည်နဲ့ မင်းဟာမင်း အရေမရ အဖတ်မရတွေ ရေးပြီး စာဖတ်သူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် မငယ်နိုင် ဘလော့မှာ လာပြီး မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေ လာရေးသွားတာ မင်း မရှက်ဘူးလား
Anonymous (February 22, 2012 12:25 AM) နဲ့ ရေးသွားတာ Myanmar Astronomy နာမည် သုံးပြီး မငယ်နိုင်ကို မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲပြီး စော်ကားသွားတဲ့ ကောင်နဲ့ အတူတူပဲ
Myanmar Astronomy ဘလော့ ဆိုတာက မျက်ကန်း ဖော်လံဖား စစ်ကျွန်စစ်စစ် ရုရှက စစ်ဗိုလ် SLIP ပါဝင် ရေးသားနေတဲ့ ဘလော့ပဲ
SLIP ဆိုတဲ့ ကောင်ကလဲ မဆဲတတ်သလိုလို၊ မပုတ်ခတ် မစော်ကားတတ်သလိုလို မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင် ပုံစံ ဖမ်းပြီး သူတော်ကောင်းယောင် ဆောင်နေတဲ့ ကြောင်သူတော်ပဲ
ရုရှက စစ်ဗိုလ် SLIP က SLIP ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့တော့ မဆဲဘူး၊ မစော်ကား မပုတ်ခတ်ဘူး
ဒါပေမယ့် SLIP က (စစ်သည်) ဆိုတဲ့ နာမည် အပါအဝင် တခြားနာမည်တွေ သုံးပြီး ဘလော့ဂါ မငယ်နိုင်ကို လာလာပြီး ပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက်တာကို လူမိသွားတော့မှ အရှက်ကွဲပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်
ဒါတောင် "ကျနော်က ကိုSLIP မဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုSLIP ကို ကျနော် အပြင်မှာ မြင်ရင်တော့ မြင်ဖူးမှာပါ" ဆိုပြီး ပလီစေ့ခြောက်ချက် နဲ့ ဗြောင်လိမ်သွားသေးတယ်
ပြီးတော့ Myanmar Astronomy ဘလော့မှာ စစ်အုပ်စုရဲ့ ဒေါက်တိုင် SLIP ရဲ့ အပေါင်းအသင်း စစ်ကျွန်တွေက ဘလော့ဂါ မငယ်နိုင် ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Nge Naing နာမည်နဲ့ မဟုတ်တရုတ် ပေါက်ကရတွေ ရေးထားတာကို Myanmar Astronomy ဘလော့ရဲ့ Admin SLIP က မဖျက်ဘဲ ထားတာက အဲဒီလို စစ်ကျွန်တွေက ပြည်သူတွေကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်ကို SLIP က အားပေးအားမြှောက် လုပ်နေတာပဲ
ဒါဟာ ရုရှက စစ်ဗိုလ် SLIP အပါအဝင် စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်တွေက ပြည်သူတွေကို ရန်သူလို သဘောထားပြီး နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဥပမာတခုပါပဲ
စစ်မုန်း Feb 24, 2012 04:06 PM
Anonymous (February 25, 2012 4:32 AM) သို့
ABSDF မြောက်ပိုင်း ညှင်းပန်းသတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စက မင်းတို့လို စစ်ကျွန်တွေနဲ့ မဆိုင်ဘူးကွ
မင်းတို့ ဘာမှ ဝင်ရှုပ်နေစရာ မလိုဘူးကွ
ABSDF ထဲက အာဏာရူး လူရမ်းကားတစုက ကျောင်းသားရဲဘော်အချင်းချင်း နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေက လူမဆန်လွန်းတဲ့ လူသတ်မှုကြီးတွေ၊ အရမ်း ဆိုးရွားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြီးတွေ ဖြစ်လို့ ဆွေးနွေးရမယ့် ရှုထောင့်တွေက အရမ်း ကျယ်ပြန့်လို့ ABSDF တဖွဲ့ထဲတင်မက ABSDF အပေါ် စေတနာမှန်ထားတဲ့၊ ကချင်ပြည်၊ ပါဂျောင်၊ ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ မတရား အသတ်ခံ၊ အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားရဲဘော်တွေအပေါ်မှာ စေတနာမှန်ထားတဲ့၊ အမှန်တရားကို လေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့ ပြည်သူတွေပါ ပါဝင်ဆွေးနွေးနေတာကို ငါတို့ လက်ခံတယ်
အေး ... ဒါပေမယ့် ABSDF အပေါ် ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း စေတနာယုတ်နဲ့ အမြဲ ကြံစည်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့၊ ကချင်ပြည်၊ ပါဂျောင်၊ ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ မတရား အသတ်ခံ၊ အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားရဲဘော်တွေအပေါ်မှာ စေတနာမှန် မထားတဲ့၊ အမှန်တရားကို လေးစားတန်ဖိုး မထားတဲ့၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတန်ဖိုး မထားတဲ့ စေတနာမမှန်တဲ့ မင်းတို့လို စစ်ကျွန်တွေက ABSDF မြောက်ပိုင်း ညှင်းပန်းသတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စမှာ ဘာမှ ဝင်ရှုပ်နေစရာ မလိုဘူးကွ
အောင်နိုင်၊ မျိုးဝင်း၊ သံချောင်း အပါအဝင် ကျောင်းသားအာဏာရှင် တစုက အာဏာရှင်စရိုက်နဲ့ အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး လုပ်ချင်သလို လုပ်ခဲ့၊ နှိပ်စက်ချင်သလို နှိပ်စက်ခဲ့၊ သတ်ချင်သလို သတ်ခဲ့တာ ဖြစ်လို့ ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ့မှ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး
ဒါကြောင့် အဲဒီ အင်မတန် ဆိုးရွားလှတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြီးကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ABSDF အတွင်းက အောင်နိုင်၊ မျိုးဝင်း၊ သံချောင်း၊ လဆိုင်း၊ သန်းဇော် အပါအဝင် လူသတ်သမားတွေကို ပြည်သူစစ်စစ်တွေက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက် ရှုတ်ချကြတာကို လက်ခံတယ်
မင်းတို့ စစ်ကျွန်တွေ ပြောတဲ့ (( ABSDF ကို အရမ်းစိတ်ပျက်တယ် )) ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့
စကားကို ပြည်သူစစ်စစ်တွေက ပြောရင် တစုံတခုသော အတိုင်းအတာအထိ ငါတို့ လက်ခံနိုင်သေးတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြည်သူတချို့က ABSDF အတွင်းက ကျောင်းသားအာဏာရှင်တစုရဲ့ လူမဆန်တဲ့ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကို (လူတစုရဲ့လုပ်ရပ်) လို့ မမြင်တော့ပဲ ABSDF အဖွဲ့ကို အဖွဲ့အနေနဲ့ ပုတ်ခတ်လာရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက ပြည်သူတချို့က အေဘီသမိုင်းကို လုံးဝ မသိကြလို့ပဲ
(Facebook မှာ အေဘီ မြောက်ပိုင်း လူသတ်မှုတွေကို ဝေဖန်ကြတဲ့ ပြည်သူအများစုက စေတနာမှန်နဲ့ ဝေဖန်ကြတာပါ
အဲဒီထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေးတွေ၊ စစ်ကျွန်တွေ အနည်းအကျဉ်းကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရောပါလာတာပေါ့
စစ်အာဏာရှင်ဝါဒဖြန့်ဘလော့တွေမှာတော့ ထောက်လှမ်းရေးတွေ၊ စစ်ကျွန်တွေက ပြည်သူ အယောင်ဆောင်ပြီး အေဘီ အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းသင့်တယ် ဆိုပြီး တိုက်ခိုက်တာပေါ့
ဒါကို နားယောင်ပြီး အေဘီသမိုင်းကို လုံးဝ မသိတဲ့ ပြည်သူတချို့ကပါ အေဘီကို အဖွဲ့အစည်းအရပါ အထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ သုံးစားမရအောင် စော်ကားလာကြတာပါ
အားလုံး သတိပြုသင့်တာကတော့ Facebook မှာ ABSDF မြောက်ပိုင်း ညှင်းပန်းသတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စကို ဆွေးနွေးဝေဖန်နေသူ အများစုက စေတနာမှန်နဲ့ ဝေဖန်နေကြတဲ့ ပြည်သူစစ်စစ်တွေပါ
မပြောပလောက်တဲ့ အနည်းစုကသာ ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ စစ်ကျွန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်)
အေဘီ သမိုင်းကို ပြည်သူတချို့က လုံးဝ မသိဘဲ ဖြစ်နေတာဟာ အဲဒီ ပြည်သူတွေရဲ့ အပြစ် မဟုတ်ဘူး
အဲဒီလို ပြည်သူတွေက အေဘီ သမိုင်းကို မသိအောင် စစ်အုပ်စုက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ထားလို့ ဖြစ်နေတာ
ဒါကြောင့် အေဘီ သမိုင်းကို လုံးဝ မသိတဲ့ ပြည်သူစစ်စစ်တွေက ABSDF ထဲက ကျောင်းသားအာဏာရှင် လူသတ်သမားတွေကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချရင်း၊ ရှုတ်ချရင်းနဲ့ ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းသားရဲဘော် ၁၀ဝ ကျော်ကို အောင်နိုင်၊ မျိုးဝင်း၊ သံချောင်း တို့က နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်လို့ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအဝင် ၃၈ ယောက် အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရလို့ မတရား ခံခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်တွေဖက်က၊ အမှန်တရားဖက်က၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဖက်က၊ ABSDF ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှုထောင့်က၊ မြန်မာလူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှုထောင့်က၊ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အမဲစက်ကြီး စွန်းထင်းခဲ့ရတဲ့ ရှုထောင့်ကနာကျည်းခံစားရလွန်းလို့ အောင်နိုင်၊ မျိုးဝင်း၊ သံချောင်း အပါအဝင် ABSDF ထဲက အာဏာရူး လူသတ်သမားတွေကို ရှုတ်ချရင်း၊ ရှုတ်ချရင်းနဲ့ အေဘီ ကို အဖွဲ့အစည်း အနေနဲ့ပါ စော်ကားတဲ့အထိ ဖြစ်လာတာကိုလဲ တစုံတခုသော အတိုင်းအတာအထိ ငါတို့ လက်ခံနိုင်သေးတယ်
အေး ... ဒါပေမယ့် ABSDF ကို စတင် ဖြစ်တည်လာကတဲက ပျက်စီးအောင် ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ပါးစေ မင်းတို့လို စစ်ကျွန်တွေက ABSDF မြောက်ပိုင်း ညှင်းပန်းသတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စမှာ ဘာမှ ဝင်ရှုပ်နေစရာ မလိုဘူးကွ
စစ်မုန်း Feb 24, 2012 04:18 PM
(February 25, 2012 4:32 AM)
ပွဲလန့်တုန်း ဖျာဝင်ခင်းတဲ့ စစ်ကျွန်
ABSDF မြောက်ပိုင်း ညှင်းပန်းသတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စက (( ABSDF တခုလုံးရဲ့ မူဝါဒ၊ သဘောထား မဟုတ်ဘဲ ABSDF အတွင်းက အာဏာရူးတစုရဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ ရမ်းကားမှုသာ ဖြစ်တယ်။ )) လို့ အပေါ်မှာ ( အေဘီချစ်သူ) ရေးထားတာကို သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်ကြကွ
အပေါ်က Comment ( ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဦးညွတ်ဆဲပါပဲ (၂) ) (February 21, 2012 10:25 AM) မှာ ဖတ်ကြည့်ကြကွ
မင်းတို့စစ်ကျွန်တွေ ဘာမှ ဖျာဝင်ခင်း မနေကြနဲ့ကွ
ပြည်သူ အယောင်ဆောင်ပြီး ရောင်တော်ပြန်နဲ့ ရောလွှတ်ပြီး ABSDF အဖွဲ့အစည်းကို လာပြီး တိုက်ခိုက် မနေကြနဲ့ကွ
Anonymous Feb 26, 2012 10:43 AM
ABSDF ကို မတိုက်ခိုက်ကြနဲ.ဆိုပါလား
Anonymous Feb 26, 2012 10:50 AM
စစ်မုန်း နာမည်နဲ. ကွန်းမန်.ပြန်ပေးတာလည်း ပြန်ပေးပါ
Myanmar Astronomy နာမည်နဲ. လာရေးတယ်ဆိုတာ မငယ်နိုင်သိတော.ဖျက်လိုက်တယ်ထင်တယ်
အဲဒီ မငယ်နိုင်ပဲသိလိုက်တဲ.ဟာကို ကိုယ်.ဘာကိုယ်ပြန်ပြီး ထောက်ပြကာကွယ်နေတော.
မငယ်နိုင်နဲ. စစ်မုန်းက တစ်ယောက်တည်းမှန်း သိသာသွားတာပေါ.
စစ်မုန်း Feb 26, 2012 12:20 PM
Anonymous (February 27, 2012 5:43 AM)
Anonymous (February 27, 2012 5:50 AM) သို့
Anonymous (မောင် ၊ mg ၊ zaw ၊ ဦးသူတော်၊ မှော်ဆရာ ... နာမည်မျိုးစုံနဲ့ လျှာအခွ ၁၀ဝ လောက်နဲ့ နှောင့်ယှက် တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့) ရုရှားပြန် စစ်သား က ထင်ရာမြင်ရာတွေ ပြောနေလိုက်တာ
မငယ်နိုင်ကို ရမ်းသန်းပြီး စွပ်စွဲနေလိုက်တာ
အချက် မသိတော့ သားမက် သူခိုးထင် တာ ကျနေတာပဲ
မင်းလဲ အချက် မသိတော့ ဘကြီးကို ကြီးတော် ထင်နေပြန်ပြီ
မငယ်နိုင်ရဲ့ စာရေးပုံနဲ့ မင်းဘကြီး စစ်မုန်းရဲ့ စာရေးပုံနဲ့ အကွာခြားကြီး ကွာခြားတာကိုတောင် မမြင်ရှာဘူး
မိုက်မဲထုံပေ၊ ဒုံးဝေး သန်းရွှေ ရဲ့ တပည့် ပီသလိုက်တာ
မောင် (mg) ဆိုတဲ့ ရုရှားပြန် စစ်သားက မငယ်နိုင်ကို စစ်မုန်း လို့ အတင်း စွပ်စွဲနေလိုက်တာ
ရော်နယ်အောင်နိုင်က ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ထောက်လှမ်းရေး လို့ အတင်း စွပ်စွဲနေတဲ့ အတိုင်းပဲ
မင်း အဲဒီလောက် သေချာနေရင် ရော်နယ်အောင်နိုင်လို ဆက်ပြီး ပြောပါဦးလား
"အခု ဖမ်းပြီး နှိပ်စက်နေတဲ့ ကျောင်းသားရဲဘော် ၁၀ဝ ကျော်ထဲမှာ ကျောင်းသားအစစ် တယောက် ပါရင် ကြိုးစင်ပေါ်ကို ရင်ကော့ပြီး တက်သွားမယ်" လို့ ရော်နယ်အောင်နိုင် စိန်ခေါ်သလို စိန်ခေါ်ကြည့်လိုက်လေ
"အခု စစ်မုန်း နာမည်နဲ့ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက် ၃ ခုထဲမှာ စစ်မုန်း အစစ်ရဲ့ မှတ်ချက် အစစ် တခု ပါရင် နာမည်မျိုးစုံ သုံးပြီး မငယ်နိုင်ကို ဆဲဆိုလိုက်၊ ပုတ်ခတ်လိုက်၊ အရေမရ အဖတ်မရ ရေးလိုက် အမြဲလာလုပ်နေတဲ့ မင်းရဲ့ အောက်တန်းစားအကျင့်တွေကို ခဝါချပြီး မငယ်နိုင်ကို နေ့တိုင်း လာကန်တော့မယ်" လို့ စိန်ခေါ်ကြည့်လိုက်လေ
စစ်မုန်း Feb 26, 2012 12:49 PM
ဟေ့ စစ်ကျွန် မောင် (mg)
မင်းတို့ စစ်ကျွန်တွေနဲ့ ABSDF မြောက်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးကွ
ဘာမှ ဝင်ပြီး ပွားမနေနဲ့ကွ
ပွဲလန့်တုန်း ဖျာ ဝင်ခင်း မနေနဲ့ကွ
ကျက်သရေတုံးလို.ပါ )) ဆိုပြီး
ခွေးပါးစပ်က ခွေးစကား ထွက်မနေနဲ့
မင်း ကန်းနေလား၊ ပင်းနေလား၊
ABSDF အတွင်းက လူသတ်မှု ကျူးလွန်တဲ့ မင်းမဲ့ဝါဒီ လူရမ်းကား တစုကို အေဘီ ရဲဘော်တွေရော၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေရော၊ ပြည်သူတွေပါ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချနေကြတာ မင်း မမြင်ဘူးလား၊ မကြားဘူးလား
သမိုင်းမှန်ကို ထုတ်ဖေါ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေကြတာ မင်း မမြင်ဘူးလား၊ မကြားဘူးလား
သန်းရွှေ အမိန့်နဲ့ စစ်ခွေးတပ်က အပြစ်မဲ့ အရပ်သား ၈၁ ယောက်ကို ဥပဒေမဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ ခရစ်စတီကျွန်းလူသတ်ပွဲ (၁၉၉၈)
သန်းရွှေ အမိန့်နဲ့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ ၁၀ဝ ကျော်ကို မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ ရိုက်သတ်ခဲ့တဲ့ ဒီပဲရင်းလူသတ်ပွဲ (၂၀ဝ၃)
သန်းရွှေ အမိန့်နဲ့ စစ်ခွေးတပ်က အပြစ်မဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူ ၁၀ဝ ကျော်ကို ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင် လူသတ်ပွဲ (၂၀ဝ၇)
တုန်းက ဘယ်စစ်ခွေးတွေ သန်းရွှေကို အခုလို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသလဲ
ဘယ်စစ်ခွေးတွေ သန်းရွှေကို သမိုင်းမှန်ကို ထုတ်ဖေါ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုသလဲ
စစ်မှန်တဲ့ ကျောင်းသားရဲဘော်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက မင်းတို့လို အာဏာရှင် လက်ပါးစေတွေလို မလုပ်ဘူး
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်း ကျောင်းသားတပ်မတော် တပ်ရင်း ၂၀၁ တခုတည်းမှ ကျဆုံးစာရင်း Feb 26, 2012 01:35 PM
ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
အေဘီ အဖွဲ့ဝင် အများစုသည် မည်သည့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွား၊ မည်သည့် ဆုလဒ်ကိုမှ မျှော်ကိုးခြင်း မရှိဘဲ မြန်မာပြည်သူများ စစ်အာဏာရှင်၏ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်သက်သက်ဖြင့် ကျောင်းသားတပ်မတော်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်၏။ အေဘီ အဖွဲ့ဝင် အများအပြားသည် ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း အသက်၊ သွေး၊ ချွေး တို့ဖြင့် ပေးဆပ်သွားကြ၏။ ကျောင်းသားတပ်မတော်သားတို့၏ တော်လှန်ရေးခရီးလမ်းသည် မုန်တိုင်းထန်သော ပင်လယ်ခရီး ဖြစ်၏။ ကျောင်းသားတပ်မတော်သားတို့၏ ဘဝသည် စစ်အာဏာရှင်၏ ခါးပိုက်ဆောင်စစ်တပ်က စစ်သားများထက် အဆပေါင်းများစွာ ခက်ခဲ ပင်ပန်း ကြမ်းတမ်း၏။ အေဘီ မြောက်ပိုင်းလူသတ်သမားများ၏ လုပ်ရပ်သည် အေဘီ ၏ ခံယူချက် မဟုတ်၊ အေဘီ ၏ ကျင့်စဉ် မဟုတ်။ အေဘီ မြောက်ပိုင်း အတွင်းသို့ ကျောင်းသားအစစ်များနှင့် ရောယောင်ပြီး ဝင်ရောက်ကာ အာဏာကို ယုတ်မာ အောက်တန်းကျသော အစီအစဉ်ဖြင့် အာဏာသိမ်းလိုက်သော မင်းမဲ့ဝါဒီ အာဏာရူးများ၏ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းသည့် ဥပဒေမဲ့ ရမ်းကားမှုသာ ဖြစ်၏။ အေဘီ၏ ထွန်းပြောင်ခဲ့သော အစဉ်အလာကို အေဘီ မြောက်ပိုင်း အာဏာရူးများ၏ လူသတ်ပွဲများက ဖျောက်ဖျက်နိုင်မည် မဟုတ်။ အေဘီ အဖွဲ့ဝင် အများစု၏ ရိုးသားမှု၊ အနစ်နာခံမှု၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှု၊ ပေးဆပ်မှုများကို အေဘီသမိုင်း သိသော ပြည်သူများက ကမ္ဘာတည်သရွေ့ အမှတ်ရနေကြမည်သာ ဖြစ်၏။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်စစ်စစ် ကိုထွန်းအောင်ကျော် (ဓါတ်ပုံ) Feb 26, 2012 03:06 PM
ခေါင်းစဉ်ကို click လုပ်ပြီး ABSDF မြောက်ပိုင်းက လူသတ်ကောင် ရော်နယ်အောင်နိုင် နဲ့ အပေါင်းပါ အာဏာရူးတစုက မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ ဥပဒေမဲ့ ခေါင်းဖြတ်ပြီး သတ်ပစ်လိုက်တဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော် (ABSDF မြောက်ပိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ) ရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ )
အချိန်မတန်ခင် လွင့်ပျောက်ခဲ့ရတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းကြယ်ပွင့်
စစ်အစိုးရက လွှတ်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးလို့ မမှန်မကန် စွပ်စွဲခံရပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခံရပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ရက်နေ့မှာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပါဂျောင် ABSDF (မြောက်ပိုင်း) မှာ ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရသူ
ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF) မြောက်ပိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ
အထက်ဗမာပြည် ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း (၁၉၈၈-၉၀)
Ko Ko Gyi - Who is he ?
Khin Maung Htway - ကိုထွန်းအောင်ကျော် (AB မြောက်ပိုင်း) ကချင်နယ်မြေမှာ အသတ်ခံလိုက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦးပါ။ လူခြင်းတော့ မရင်းနှီးပါ သူအကြောင်းတွေ ကြားဘူးရင်း နဲ့ လေးစားမိသူတစ်ဦးပေါ့
Maungmaung Skw - အိမ်မှာ အမြဲလာတတ်တဲ့- အိမ်မှာ ဖိုးညီနဲ့ အစည်းအဝေးတွေ အမြဲ လာလုပ်တတ်တဲ့ သူ----- ဒေါက်တာသန်းအောင်နဲ့ ဒေါက်တာရှီလာစန်းစန်းမြင့် တို့ရဲ့သား- ရော်နယ်အောင်နိုင် တို့အဖွဲ့က ဒေါက်တာနိုင်အောင်ရဲ့ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် စစ်စစ် ထွန်းအောင်ကျော် လေ--------
Maungmaung Skw - Sorry- ဒေါသတကြီး ရေးလိုက်လို့ သဒ္ဒါ မှားသွားတယ်- ဒေါက်တာတွေရဲ့သား လူသတ်သမား က ရော်နယ်အောင်နိုင်---
Moe Sal - ခု.. သတင်းတခု.. ရထားပါတယ် မခင်မင်းဇော်ဆီကပါ ခု အေဘီမြောက်ပိုင်းကို ဦးစီးပြီး ပြန်ဖွင့်တဲ့ လှဆောင် ဟာ.. ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ကို သတ်ခဲ့တဲ့ ဦးစီး လူသတ်သမားအဖွဲ့ကပါ။ ဟိုတလောက မြောက်ပိုင်းမှာ ဌါနချုပ် ပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။...
Maungmaung Skw - လူသတ်ပွဲထဲမှာ ဝါသနာပါရာ အခန်းက ပါခဲ့ကြတဲ့ကောင်တွေ ဒီလိုဘဲ ရပ်တည်စရာ ရှာနေရမှာ ပေါ့- KIA - KIO တို့က အရင်လို အဖြစ်မျိုး ထပ်မဖြစ်ရအောင် ထိမ်းချုပ်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။
Maungmaung Skw -
ABSDF (NB) ဖြစ်မြောက်ရေး လုပ်ခဲ့ကြတဲ့- အပတ်စဉ် ၅ ဆင်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး- ကျွန်တော့်ကို တောထဲ သွားဖြစ်အောင်- ABSDF သွေးသမိုင်း- ရေးဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့သူ- လက်ရှိ " ဖေဖဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ မြောက်ပိုင်း AB နဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်နေ့" စီစဉ်နေသူ- ညီညီကျော် တစ်ယောက် ပျောက်ချက်သားကောင်းပြီး အသံတိတ်နေတယ်- အားလုံး သတိထားနေကြပါ။
Hay Shan - ကဒ်ချိုးလိုက်လို့ ပျောက်သွားတာနဲ့ တူတယ်ဗျ
Aung Khin Myint ‎- ဒေါက်တာသန်းအောင်နဲ့ ဒေါက်တာရှီလာစန်းစန်းမြင့်က ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးလား ခင်ဗျာ ...
Kyaw Gyi AB - ရော်နယ်အောင်နိုင်ရဲ့ မိဘပါ
Aung Khin Myint - ဟုတ် ကျေးဇူး အကို ...
Hmone Shwe Yi ‎- ကိုထွန်းအောင်ကျော် ပုံ ကြည်.ရတာ ငိုချင်တယ်ဗျာ
ရော်နယ်အောင်နိုင် တို့ ABSDF မြောက်ပိုင်း အာဏာရူး အုပ်စုရဲ့ ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်စစ်စစ် ကိုထွန်းအောင်ကျော် (ဓါတ်ပုံ ၆ ပုံ) Feb 26, 2012 03:22 PM
ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ကိုထွန်းအောင်ကျော် ကျောင်းသားတပ်မတော်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလမှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ ၆ ပုံ ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ )
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်စစ်စစ် ကိုထွန်းအောင်ကျော် (ABSDF မြောက်ပိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ) ဟာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ရက်၊ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပါဂျောင် ABSDF (မြောက်ပိုင်း) မှာ အောင်နိုင် (ရော်နယ်အောင်နိုင်)၊ သံချောင်း၊ မျိုးဝင်း၊ လှဆောင် (လှဆိုင်) တို့ ABSDF (မြောက်ပိုင်း) အာဏာရူး အုပ်စုရဲ့ ခေါင်းဖြတ်ပြီး သတ်တာကို ခံရတဲ့ အပြစ်မဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော် ၁၅ ဦးထဲက တဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်စစ်စစ် ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ဟာ "စစ်အစိုးရက လွှတ်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး သူလျှို" လို့ မမှန်မကန် စွပ်စွဲခံရပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခံရပြီးမှ ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရတာပါ။
အဲဒီလို တရားဝင် ကြေညာပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားရဲဘော် ၁၅ ဦး အပြင် မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ နှိပ်စက်ရင်း အသက်ဆုံးသွားရသူတွေ နဲ့ တရားဝင် မကြေညာဘဲ အသတ်ခံခဲ့ရသူတွေပါ ပေါင်းလိုက်ရင် အဲဒီတုန်းက ကျောင်းသားရဲဘော် ၁၀ဝ ကျော် အဖမ်းခံပြီး လူမဆန်အောင် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ အထဲက ကျောင်းသားရဲဘော် ၃၈ ယောက် ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ABSDF မြောက်ပိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော် (မန္တလေး) ကို နှိပ်စက်ပြီး ခေါင်းဖြတ် သတ်ပုံ (မျက်မြင်သက်သေ ကိုကျော်ခိုင်ဝင်း ၏ တင်ပြချက်) Feb 26, 2012 03:50 PM
- သံပြားအား မီးဖုတ်ပြီး ပေါင်ခြေသလုံးထံ ကပ်ထားခြင်း၊
- ဗိုက်ပေါ်သို့ ကတ္တရာစီးပြားများကို မီးရှို့၊ အစက်ချ မီးမွှေးခြင်း၊
- သံချောင်းများကို မီးဖုတ်ခါ၊ ပေါင်အတွင်းသို့ ထိုးသွင်းခြင်း၊
- စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြား ခြောက်ခြားစေရန်၊ ကိုကျော်ဝေကို ထင်းတုံးပေါ် တင်ပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ထားခါ၊ ထိုခေါင်းပြတ်မှ၊ ပန်းထွက်နေသော သွေးများကို၊ သောက်ခိုင်းခြင်း၊
- ကိုချိုကြီး၏ လက် ကို လက်ကောက်ဝတ်မှ ခုတ်ပြတ်သော်လည်း၊ ခုတ်ချက်မမှန်ကာ၊ လက်ဝါးအရင်းပိုင်းမှ ပြတ်ထွက်ခါ၊ ( လက်မ တချောင်းထဲပင် ကျန်ထားပါသည်)၊ ထိုလက်ပြတ်အား ကိုက်ထားခိုင်းခြင်း၊
- ခေါင်းဖြတ် သတ်ခံရချိန်ထိ၊ ဒုတ်ကောက်ဖြင့်သာလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီး၊ အသတ်ခံလိုက်ရချိန်တွင်၊ ခေါင်းမပြတ်သဖြင့်၊ ပြန်ထလာသည်ကို၊ ပေါက်ပြားနောက်ဖင်ဖြင့်၊ ရိုက်ချ သတ်ခံရပါသည်။
(ကိုအောင်မိုးဝင်း ရဲ့ "မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း - ၇) -
ABSDF မြောက်ပိုင်း ရဲဘော်ဟောင်း ကျော်ခိုင်ဝင်းရဲ့ အစီရင်ခံစာ"
( http://www.pyustate.com/2012/01/blog-post_28.html )
မြတ်ကြည် Feb 26, 2012 10:24 PM
ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို နှိပ်စက်ပြီး မျိုးဝင်းက ခေါင်းဖြတ် သတ်ပုံ (မျက်မြင်သက်သေ ကိုထင်လင်းအောင် ၏ တင်ပြချက်) Feb 27, 2012 06:44 AM
ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကိုတော့ သံချောင်းကို မီးဖုတ်ပြီး ဒူးခေါင်းကို ထိုးတဲ့အတွက် လမ်းကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်တော့ပါ။ သို့နှင့် အားမရသေးဘဲ အဆိပ်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစက် တောင်းပြန်ပါသည်။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်က "ကျနော့်မှာ မရှိဘူး" လို့ ပြောတော့ မရဘူး။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်က အချိန်ဆွဲပြီး "သူ န၀တ သူလျှို မဟုတ်ဘူး" ဆိုတာကို KIA နားလည်အောင် ကြိုးစားပေမယ့် KIA က ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို မကာကွယ်ပေးဘဲ မသိယောင် ဆောင်နေခဲ့ပါသည်။
ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို နှိပ်စက်ပုံမှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော် လမ်းနည်းနည်း လျှောက်နိုင်မှန်း သိတော့ လှေခါးက ၀ါးတွေကို ပြောင်းပြန် လုပ်ထားသည်။ အဲဒီအပေါ်ကို ဖင်ဒရွတ်ဆွဲပြီး တက်နေတဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ကန်ချလိုက်တော့ ဒလိန့်ခေါက်ခွေး ကျသွားပါသည်။
၀ါးငုတ်တွေပေါ် ကျတဲ့ ဒဏ်ရာကြောင့် ကိုထွန်းအောင်ကျော် အိပ်ယာပေါ်က မထနိုင်တော့ပါ။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ ညီ ချိုကြီး ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကို ဖြတ်ပြီး ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ကိုက်ခိုင်းထား၏။ ကျနော် ငိုချင်လာတဲ့အထိ ရင်ထဲမှာ ထိခိုက်စွာ ခံစားရပါသည်။ အားလုံး မြင်နေရပေမယ့် ကိုယ်တိုင်လည်း အနှိပ်စက် ခံနေရကြရတာမို့ တယောက်ကိုတယောက် မကယ်နိုင်ကြပါပေ။
နောက်ဆုံးမှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်က "အဖမ်းခံထားရတဲ့ ရဲဘော်အားလုံးက ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော် တယောက်တည်းသာ ထောက်လှမ်းရေး ဖြစ်တယ်" လို့ ပြောပြီး အသက်ပေးသွားပါသည်။ မျိုးဝင်းကိုယ်တိုင် ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ဒါးနဲ့ ခုတ်သတ်လိုက်တာပါ။
ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို အလွန် လေးစားမိပါသည်။ ကျနော် မသေသေးသမျှ အမှန်တရားတွေကို ဖော်ထုတ်ပါမည်ဟု သံဓိဌာန်ချထားပါသည်။
("လိုင်စင်တောင် ပါဂျောင်စခန်းမှ ရင်နင့်ဘွယ်ဖြစ်ရပ်များ ( ထင်လင်းအောင် ၏ အစီရင်ခံစာ)"
ကိုထွန်းအောင်ကျော် ABSDF မြောက်ပိုင်း သို့ တောခိုရန် မထွက်ခွာမီ မိခင်ကို နှုတ်ဆက်စကား (၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ) Feb 27, 2012 09:59 AM
"အမေ၊ မေသိန်းက သစ္စာလေးပါး မသိဘူး။
သူ့ ကို သိစေချင်တယ်။
ပြီးတော့ အမေလည်း မသိပါဘူး။"
"ဟဲ့၊ မင်းတို့ရှိနေတာ ငါက ဘယ်လို သိရမှာလဲ။"
"ကျွန်တော်တို့မရှိမှ အမေ သိလာမှာလား။"
"အဲ၊ သိချင်လည်း သိလာမှာပေါ့။"
"ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ကို သံယောဇဉ် ဖြစ်နေသရွေ့ အမေ မသိသေးပါဘူး။
အမေ၊ ကျွန်တော် သွားတော့မယ်။
အမေ၊ သံယောဇဉ်တွေကို လျှော့ပါ၊ အမေ။"
(Credit - ညီညီကျော်)
&quot;အော်.. အောင်နိုင် က ဒီလိုတောင် လုပ်ရက် သလား။ ငါ့သားကြီးကတော့ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့။&quot; (ကိုထွန်းအောင်ကျော် ၏ မိခင်၊ ၆-၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့) Feb 27, 2012 10:03 AM
ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ကိုထွန်းအောင်ကျော် ၏ မိခင် (အသက် ၇၈ နှစ်) ( ၆-၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့) ဓာတ်ပုံကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကိုထွန်းအောင်ကျော် ရဲ့ အမေ
သားတွေလုပ်သမျှ "ကကြီး" က "အ" အထိ သိတဲ့ အမေ၊
အိမ်မှာ ဝင်၊ ထွက်သူ အားလုံးကို သိတဲ့ အမေ၊
"မင်းက ဘယ်သူ့ သားလဲ" လို့ မေးတတ်တဲ့ အမေ၊
မူလ မန္တလေးက ဇစ်မြစ်ကို သိကြတယ်လေ။
ဒီနေ့(၆-၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့) မှာတော့ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ရဲ့ အမေက အခုလိုပဲ ပြောနိုင်ရှာတော့တယ်။
"အော်.. အောင်နိုင် က ဒီလိုတောင် လုပ်ရက် သလား။
ကိုထွန်းအောင်ကျော် ရဲ့ အမေနဲ့ ရော်နယ်အောင်နိုင် ရဲ့ အမေ က ကွန်ဗင့်ကျောင်း မှာတုန်းက ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ကိုထွန်းအောင်ကျော် ရဲ့ အမေက ၆-၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှာ ပြောပြရှာပါသေးတယ်။
"အောင်နိုင် ရဲ့ အမေက ရှီလာဝီလျံ လေ။
နောက်တော့ ဒေါက်တာရှီလာစန်းစန်းမြင့် လို့ ခေါ်တယ်။
အမေနဲ့ အောင်နိုင် ရဲ့ အမေ ရှီလာဝီလျံ (ဒေါက်တာရှီလာစန်းစန်းမြင့်) က ကွန်ဗင့်မှာ သူငယ်ချင်းပေါ့။
အော်.. အောင်နိုင် က ဒီလိုတောင် လုပ်ရက် သလား" တဲ့။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် စစ်စစ် ကိုထွန်းအောင်ကျော် နဲ့ လူသတ်သမား ရော်နယ်အောင်နိုင် (နှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ) Feb 27, 2012 10:07 AM
ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ဓာတ်ပုံကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Maungmaung Skw - အိမ်မှာ အမြဲလာတတ်တဲ့- အိမ်မှာ ဖိုးညီနဲ့ အစည်းအဝေးတွေ အမြဲ လာလုပ်တတ်တဲ့ သူ-----
ဒေါက်တာသန်းအောင်နဲ့ ဒေါက်တာရှီလာစန်းစန်းမြင့် တို့ရဲ့သား- ရော်နယ်အောင်နိုင် တို့အဖွဲ့က ဒေါက်တာနိုင်အောင်ရဲ့ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် စစ်စစ် ထွန်းအောင်ကျော် လေ--------
(Credit - Maungmaung Skw)
ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခံရပြီး အသတ်ခံရတဲ့ လူတွေရဲ့ အမေတွေနဲ့ လူသတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူတွေရဲ့ အမေတွေကို သနားမိပါတယ် Feb 27, 2012 10:12 AM
ကျမက ကိုယ်တိုင် တောမခို..နိုင်ငံရေးမလုပ်..ထောင်မကျခဲ့ဖူးတာမို့.. မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု နဲ့ ပတ်သက်ရင် အမေ နေရာကနေပဲ တွေးမိပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ကျမသားကြီး အသက် ၂၁ နှစ် ပြည့်တော့မယ်။ သူ ဘယ် တက္ကသိုလ်မှာ သွားတက်ရမယ်လည်း မသိသေး။ အိမ်နဲ့ အဝေးမှာဆို သူ အခက်အခဲတော့ ကြုံမှာလို့ စဉ်းစား မိရင်တောင် စိတ်ထဲ တယ် မကောင်းချင်ပါဘူး။ ဒါတောင် ကျမက သားသမီးကို ကြက်သားအုပ်မကြီးလို ကိုယ်နဲ့မကွာ အုပ်ထားချင်တဲ့ အမေမျိုး မဟုတ်ပါဘူး...။
ဆိုတော့ ခုတလောတွေမှာ မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု အကြောင်းတွေ ဖတ်ရတော့ အမေတွေကိုယ်စား ရင်ထဲ မချိအောင် နာကျင်ရပါတယ်။ ဖတ်နေရင်း မျက်ရည်ကျမိတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ။ ဒါတောင် အဲဒီ အရက်စက်ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာ ကျမ သိတဲ့ သူဆိုလို့ ထိန်ထိန် (ပန်းချိထိန်လင်း) တယောက်ပဲ ပါတာပါ။
ကျမ စဉ်းစားနေမိတယ်။ ကိုယ်မွေးထားတဲ့ သားလေးတွေ… ကိုယ်နဲ့ ခွဲပြီး "တိုင်းပြည်အတွက်" ဆိုပြီး ထွက်သွားကြ.. အစားဆင်းရဲ.. အနေဆင်းရဲ.. ဘက်ပေါင်းစုံမှာ အဆင်ပြေစရာ အကြောင်းမရှိ။ ဒါပေမဲ့ "တိုင်းပြည်အတွက်" ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးတွေနဲ့ နေခဲ့ကြရင်း.. မဟုတ်မတရား "ရန်သူ့လူ" လို့ စွပ်စွဲခံရတာ။ ပိုဆိုးတာက အမေတွေမို့.. အမှန်ကို သိတယ်။ ကိုယ့်ကလေးတွေဟာ ရန်သူ့လူ မဟုတ်ကြောင်း.. မတရားသဖြင့် ရမယ်ရှာခံရတာ ဖြစ်ကြောင်း.. အမေတွေ ရဲ့ အသည်းနှလုံးက ကျိန်းသေ သိပါတယ်။
အမေ အနေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်တော့.. ကဲ.. မသင်္ကာစရာဖြစ်ဦးတော့.. လူအချင်းချင်း..သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း… ခုလောက် ရက်ရက်စက်စက် မလုပ်ရက် ပါဘူးကွယ်လို့.. အမေတွေခမျာ နာကျင်ကြရှာမယ်..။
အမေတွေရဲ့ ညပေါင်းများစွာမှာ.. ဒီသားသမီးတွေရဲ့ မျက်နှာလေးတွေ မြင်ယောင်ရင်း ပူလောင် ပြင်းပျရရှာမယ်..။ ပိုဆိုးတာက သမိုင်းမှာ ကိုယ့်ကလေးတွေကို သစ္စာဖောက်အဖြစ် သမုတ်ခံရတာကလည်း ဆိုးလွန်းလှတာပါ…။ ကျမ ဆက်ပြီး ခံစားမကြည့်နိုင်တော့ပါဘူး…။
ကျမ သားသမီး ၃ ယောက် မွေးထားတာ..။ ကလေးတွေ ဖျားရင်ကို အိပ်မရ နေမရ ထိုင်မရ… ငါသာ ဖြစ်လိုက်ပါတော့ လို့ တ, မိတဲ့အထိ…။ ဒါကို အမေတိုင်း သိပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဒီရက်ပိုင်းတွေထဲ တွေ့ရတဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်နဲ့ ကိုချိုကြီး အမေတွေရဲ့ ပုံတွေကို ကျမ ကြာကြာ မကြည့်ရက်တော့ပါဘူး..။
တချိန်တည်းမှာပဲ အဲဒီ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူတွေရဲ့ အမေတွေရော…… မနာကျင်.. မထိခိုက်.. မကြေကွဲဘဲ နေပါ့မလား… အရှက်ရတာ တခုပါ ပိုတိုး ခံစားရဦးမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်..။
ကျမကတော့ အမေတွေကို သနားတာပါပဲ…။
(တီချယ် မေငြိမ်း ရဲ့ စာစုလေးက ကောင်းလွန်းလို့ share လိုက်ပါတယ်။)
ABSDF မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေ အနေနဲ့ &quot;မမှားခဲ့ဘူး&quot; လို့ ယုံရင်လည်း ရဲရဲ တုံ့ပြန်ပြီး မှားခဲ့ရင်လည်း ၀န်ခံကြစေချင်ပါတယ် Feb 27, 2012 10:25 AM
May Nyane - ကျမ ပေးချင်တဲ့ message က ဒီအမှု ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်မိခင်.. သူ့မိခင်.. ကိုယ့်မိဘ.. သူ့မိဘရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို ငဲ့ညှာပြီး အချိန်ရှိတုန်း တခုခု တုံ့ပြန်ကြစေချင်တာပါ။
ကိုယ်တကယ် မမှားခဲ့ဘူးလို့ ယုံရင်လည်း ရဲရဲ တုံ့ပြန်ဖို့..
မှားခဲ့ရင်လည်း ၀န်ခံ တုံ့ပြန်ဖို့ လုပ်ကြစေချင်တာပါ။
Aung Khin Myint - သူများ သားသမီးတွေ တတိယ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာ ဘာပဲပြောပြော ကျနော်တို့လို အဆင်ပြေနေတာကို
အဲဒီ ခေါင်းဖြတ်ခံရ ... သတ်ဖြတ်ခံရသူတွေရဲ့ မိဘတွေ တွေ့ရင် ... ကြားရင် ...
သူတို့ သားသမီးတွေအတွက် ဘယ်လောက်တောင် ရင်ထုမနာ ဖြစ်နေမလဲ
ဆိုတာ ကျနော်တော့ စဉ်းစားလို့တောင် မရဲဘူး ဆရာမရယ် ... တကယ်ပါ ...
Wallet Mon - လုပ်တဲ့သူတွေက..ရှက်ပုံမပေါ်ဘူး အစ်မ...
Nay Lin - လုပ်ရဲရင် ခံရဲသူတွေ ဒီကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှာ မရှိတော့ပြီ ထင်ပါရဲ့..
Marlu San - "သူလျှို" ထင်လို့ အမြင်မှားပြီး သတ်မိတာက တပိုင်း (တော်တော်လွန်တဲ့ အပိုင်း)။
အခုတော့ ကြားရတာက -
သူလျှို ဟုတ်၊ မဟုတ် မတရား ညှင်းပန်း၊
မကြားဝန့် မနာသာ နည်းတွေနဲ့ နှိပ်စက် ယူထားတဲ့ ထွက်ချက်
ကိုယ်သာ ဆိုလဲ "အသား အနာခံရမယ့် အတူတူ မထူးဘူးဟယ်၊ နင် ဖြစ်စေချင်တာ ငါ ဖြစ်ပေးမယ်" လို့ ဖြေမိမှာပဲ။
လူမဆန်အောင် နှိပ်စက်မှုကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ဘို့ အကွက် မတွေ့ဘူး။
(တီချယ် မေငြိမ်း စာစုလေးက ကောင်းလွန်းလို့ share လိုက်ပါတယ်။)
မတရား ညှင်းပန်း၊ ခြေဖြတ်၊ လက်ဖြတ်၊ မကြားဝံ့ မနာသာ နည်းတွေနဲ့ နှိပ်စက်ပြီး အတင်းအဓမ္မ မတရား ရယူထားတဲ့ &quot;ကျနော်ဟာ သူလျှို ဖြစ်ပါတယ်၊&quot; &quot;ကျမဟာ သူလျှို ဖြစ်ပါတယ်&quot; ဆိုတဲ့ ထွက်ချက်တွေကို ဘယ်လို လက်ခံရမှာလဲ Feb 27, 2012 10:36 AM
"သူလျှို" ထင်လို့ အမြင်မှားပြီး သတ်မိတာက တပိုင်း (တော်တော်လွန်တဲ့ အပိုင်း)။
မကြားဝံ့ မနာသာ နည်းတွေနဲ့ နှိပ်စက် ယူထားတဲ့ ထွက်ချက်
Anonymous Feb 27, 2012 10:57 AM
Myo Maung Maung Chai ဒီကောင့်ကို ဓါးနဲ့မွှန်းပြီး ဆား၇ည်စိမ် ပြီး၇င် ခေါင်းကိုဖြတ် ဆား၇ည်စိမ်ထားတဲ့အသားကို ခွေးကျွေးလိုက်
Lumaw Latt ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကျပါ။
Naing Aung If you don't know who is the responsible person for that case, and what had happened, you should do more research before you put your judgments
Zaw Moe Aung ကို Naing Aung ခင်ဗျားဘယ်သူဆိုတာ ကျွှန်တော် မသိဘူး...ဒါပေမဲ့ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ ကိုသားဆွေ တို့ ကိုအောင်မိုးဝင်းတို့ ဖော်ပြချက်တွေက လုံလောက်နေပါပြီ....ဒီအထဲမှာခံခဲ့ရသူတဦးဆီ ဒီနေ့မနက်ကပဲ..သွားမေးပြီးမှ တင်လိုက်တာပါ......။ ဆရာ ကိုထိန်လင်း ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးကိုလည်း...ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ လူတွေကြားဖြန့်ဝေလိုက်ပြီ...နောက်ဆက်လာမဲ့ စာတွေကိုလည်း ဖြန့်မယ်..နယ်တွေလည်း ဖြန့်မယ်....။ သွားတွေ့တဲ့သူက ပြောရင်းတောင်မှ ချုံးပွဲချငိုတယ်....သူဘယ်သူဆိုတာ အချိန်တန်ရင်ပြောမယ်...အသတ်ခံရမဲ့ဘေးက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတယောက်။အခု ပါတီထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေလည်း ဒီကစ္စပြောဖြစ်တယ်...သိချင်နေကြတယ်.....အောင်နိုင်နဲ့ တခြားဖြေရှင်းချက်တွေကိုတော့ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ဘယ်လောက်ပဲဖြေရှင်း မယုံ။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ရမယ်...ဒါမျိုးကောင်တွေ...မြန်မာမြေပေါမှာမနေရဘူး...အစိုးရက မရှင်းရင်..ကျုပ်တို့ရှင်းမယ်ဗျာ.....ဒီလိုကောင်မျိုးရှင်းဘို့ ငွေဆယ်သိန်း မရင်းရဘူး။
Phay Phyo ရုပ်ကတော့ ဂျိုရုပ်ပဲ ....
Khin Zai အရင်ဆုံးသူအခု လုပ်နေတဲ့ သတင်းဌါနကိုအကျိုးအကြောင်းစာရေးသားပြီးကန့် ကွက်ဖို့ လိုပါတယ်..။သေချာရင်တော့ နိင်အောင်ဆိုတဲ့ လူကိုအဲဓီဌါနကဆက်ပြီးထားတော့ မယ်မထင်ပါဘူး..။
Zaw Moe Aung Thar Swe....... ဒီသတ်ဖြတ်မှုမှာ တာဝန်ရှိသူတွေက တလောက လက်နက်ချသွားတဲ့ သံချောင်း၊ သေသွားတဲ့ မျိုးဝင်းနဲ့ အရင်ဘီဘီစီ သတင်းထောက် လုပ်တဲ့ အောင်နိုင်တို့ပဲ။ သူနဲ့ အသတ်ခံရတဲ့ကိုထွန်းအောင်ကျော်က မန္တလေးမှာအတူတူ လုပ်ခဲ့တာပဲ။ သံချောင်းတို့က မိုးညှင်းမိုးကောင်းအုပ်။ ကျန်ဒေသကလူတွေကို ဂိုဏ်းဂနနဲ့ချတာ။ အောင်နိုင်ကလည်တော့ သွားကပ်ထားလိုက်တယ်။ အဲဒီလိုသတ်နေတာတွေကို ကေအိုင်အေက တချက် မတားဘူး။ အောင်နိုင်ဆိုတာက Ronald Aung Naing အခု ချင်းမိုင်မှာ။ သံချောင်း က လွတ်ရက်မရှိ ... သာယာဝတီထောင်မှာ ရောက်နေပြီ။ လက်ယျာထွန်းတို့ ကိုသိန်းတို့ ကိုခင်လှိုင်တို့ နဲ့တူတူပဲ။ ပြောမယ်ဆိုရင် သံချောင်း တယောက် ကျနော့် အမှုတွဲတွေနဲ့ အတူတူ သာယာဝတီထောင်မှာ ရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာ။ Ronald Aung Naing ကတော့ ကိုညိုအုန်းမြင့်တို့နဲ့ ပါတီပွဲတွေနွှဲနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့နေရတာပဲ။
Zaw Moe Aung Aung Moe Win
Yan Shinn Oo- ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆိုတာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို သတ်ပြီးတဲ့နောက် မြောက်ပိုင်းမှာ ဥက္ကဋ္ဌ တက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလေး ဆိုတဲ့သူ။ ဒေါက်တာနိုင်အောင်ဆိုတာ အောက်ပိုင်း အေဘီ ( ဗဟို) ကလူ။ မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတပ်မတော်စခန်းအပါအဝင်၊ အောင်နိုင်လေး နဲ့ ဒေါက်တာ နိုင်အောင် ကချင်ပြည်နယ်ကို သွားတုံးကပုံတွေက အစ တင်ပေးလိုက်မယ် ဟုတ်လား။ တခုချင်းစောင့်ဖတ်ပါ။ အနှစ် (၂၀) လုံးလုံး သိမ်းထားတဲ့ အရာတွေကို တခါတည်းဖတ်လိုက်ရင် ပေါ့သွားမှာ စိုးလို့ပါ
Lwin Hein Aung Aung ဟုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုအလုပ်ဖြုတ်
Ko Oo အောင်နိုင်ကိုနိုင်အောင်တို့ကအကာအကွယ်ပေးထားကြတယ်၊ပူလင်းတူဗူးဆို့တွေပါပဲ၊သူတို့ကအာဏာနဲ့ငွေကိုကြိုက်တာချင်းတူတယ်၊ဖြစ်နိုင်ရင်ABSDFစာရင်းရှင်းပွဲလုပ်သင့်တယ်၊တကယ်လို့စာရင်းရှင်းပွဲကိုဒီလူသတ်ပွဲမှာပါခဲ့သူတွေလာမယ် ဆိုရင်Fort Wayneမှာဒိုင်ခံကျင်းပပေးမယ်၊ အဓိကကိုနိူင်အောင်၊အောင်နိုင်(ကချင်)၊လှဌေး(ကချင်)၊ကျော်ကျာ်(ကချင်)တို့ပါလာဖို့လိုတယ်၊လာနိုင်မလား၊
Kyaw Swar သူတို့မှာရော ၊ အဲလိုတွေဖြစ်အောင် သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ ဖန်တီးကြတဲ့ န၀တအစိုးရရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေမှာရော တာဝန်အပြည့်အ၀ရှိတယ်လို့ မြင်တယ် ။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ အလင်းဝင်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေကို ပြန်ဖမ်းတယ် ၊ တောထဲပြန်မရောက်ရောက်အောင် ဖန်တီးကြတယ် ၊ အချင်းချင်းသွေးခွဲရေးတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ် ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မယုံကြည်ကြတော့ဘူး ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စမှာ လူမဆန်စွာ နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီလူ(အမှန်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ) ကိုတော့ အားလုံဝိုင်းဝန်းပြီး ဆန့်ကျင်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာ ၊ ဒီလူလို့သာခေါ်ရတာ လူလိုတောင်မမြင်ဘူး ။ ထွီ . . ။ သမိုင်းတွေကတော့ ပြန်ပေါ်လာပါပြီ ။ တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလည်း ဘုရားသာတနေကြတော့ ။
Steven Pk ကျဆုံးသွားသော အာဇာနည်များအတွက်လက်စားချေကြပါ
Hlaing Bwa ကျော်စွာ .... တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်ထောင်စုအကျိုးစီးပွါးဆိုပြီး ... ငါတို့ (၈၈) မျိုးဆက်က ကြိတ်ခံခဲ့ရတာတွေ သည်အချိန်မှာ ရှင်းရမဲ့အချိန်ပဲ - ဒီမိုကရေစီ လူ့ အခွင့်အရေးဆိုပြီး အာဏာခရေစီ ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေ ဖြစ်နေဆဲသူတွေ ... ငါု့တို့ မျက်စေ့အောက်မှာ မင်းလဲအမြင်ပဲ ... မနေ့ က ကိုထိန်လင်းရေးတဲ့ စာအောက်မှာ ငါရေးထားတဲ့ comment ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ် .... (Link လည်းချိတ်ပေးမယ်) ..... လှိုင်ဘွား / ၈၈ ............................ ကျောင်းသားဟား ကျောင်းထဲမှာ မြောင်းထဲမှာ ထောင်ထဲမှာ တောထဲမှာ ... စာရင်းမဲ့အင်းမဲ့ အသတ်ခံခဲ့ရတာပါ ... ခံစားခဲ့ရတာတွေကပြောလို့ မကုန်နိုင်ပါဘူး .... အခံစားရဆုံးကတော့ အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားအမည်ခံအချင်းချင်း ပက်ပက်စက်စက်လုပ်ရဲ့ခဲ့ကြတာပါပဲ .... သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေ သတ်ဖို့ အမိန့် ပေးခဲ့တဲ့သူတွေ မျက်မြင်သက်သေတွေ ကနေ့ အချိန်အထိကမ္ဘာ အရပ်ရပ်မှာအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေဆဲပါ - လှိုင်ဘွားကိုယ်တိုင် (၂) ကြိမ်ထက်မနည်း အသတ်ခံရဖို့ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ... (သည်အထဲမှာ တော်လှန်ရေး သမားဆိုသူတွေ အင်မတန်အံ့သြလောက်စရာ ကောင်းလောက်တဲ့ ဖေါက်ပြန်စွပ်စွဲမူတွေရှိခဲ့ပါ တယ် .... မြ၀တီရဲခေါင်လိုလူမျိုးတွေအထိ ကျောင်းသားတွေအပေါ်လူမျိုးစုက သတ်အောင်စွပ်စွဲတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းပါ - သူအခုသြစတြေလျှမှာ အသက်ရှင် နေဆဲပါ .... ကျွန်တော့်ကို မြ၀တီရဲခေါင်စွဲချက်တင်ချိန်မှာ အခြားကျောင်းသားတွေ RIT 141 က ... ကိုရင်အေးလိုလူတွေရှေ့ မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ ... ဒေါက်တာတူးဂျာတို့ ရှေမှာ သူတို့ သက်သေရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာ ) ... အသက်နဲ့ ရင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးမို့ ဘ၀မှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး - တော်လှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူချင်းပြန်သတ်လို့ သေ ရတာ သိပ်ရင်နာဖို့ ကောင်းပါတယ်။ (ခင်ညွန့် ကထောက်လှမ်းရေးတွေလွှတ်ထားတယ်လို့အပင်းထည့်တဲ့ စကားမျိုးတဘက်လှည့်နဲ့ သုံးချိန်မှာ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ အာဏာလုတတ်တဲ့သူတွေနဲ့လူမျိုးစုတွေအတွင်း အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသား ဟာ တိုက်ပွဲကျခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားအရည်အတွက်ထက်ပိုများမယ်ထင်ပါတယ် ...)
Steven Pk ကလဲ့စားချေရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီ...လူညီဖို့တော့လိုတယ်...
Hlaing Bwa ‎*** ဂလဲစားဆိုတာထက် ... အမှန်တရားဆိုရင် ပိုသင့်တော်မှာပါ .... သေခဲ့တဲ့သူတွေက အမှန်တကယ်သေခဲ့ အသတ်ခံခဲ့ရတာပါ။
Zaw Tun Aung တစ်ခုစဉ်းစားမိတာက၊ နှစ် ( ၂၀ ) ကျော်ကြာပြီးမှ၊ အခုမှထလုပ်နေတာနည်းနည်းနောက်ကျနေတယ်။ ခံထားခဲ့ရသူတွေက
မလုပ်ရဲခဲ့တာလား ? ပြီးတော့ ကိုသန်းတင်ဆင့်ဆိုတာ NLD ( LA) Japan မှာလုပ်သွားခဲ့တယ်။ထောက်လှမ်းရေးလား၊ သတင်းပေးလားဆိုတာလူတိုင်းသိနေရက်နဲ့ နေရာပေးခဲ့ကြတယ်။ ပြတ်ပြတ်သားသားမဆန့် ကျင်ကြဘူး။ အခုဖြစ်သင့်တာက၊ အချက်အလက်သေချာစု၊ သက်သေစုပြီး၊ Interpol ကိုတိုင်၊အမှူ့ ဖွင်၊ သေသေချာချာအပြစ်ပေးခံရအောင်လုပ်သင့်တယ် Interpol ကိုဘာကြောင့်တိုင်ခိုင်းသလဲဆိုတော့၊ သတ်ခဲ့တာက၊ကချင်ပြည်နယ်၊ဗမာနယ်နမိတ်၊ သတ်ခဲ့တဲ့သူကအခုထိုင်းမှာ၊ အဲဒီ့အတွက်နှစ်နိူင်ငံရဲက၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ရမယ်။ အဲဒီ့မှာ Interpol ကဝင်ပေးနိူင်တယ်။
Moe Zaw Aung Some people probably think that we forgot them. I personally want to know about Ko Tun Tun Aung-Minthamee camp and Ko Htay Naing suddenly disappeared in the jungle. we need the answer for that, too. There are so called student leaders who sold distressed students from ABSDF- Reg-205 to Da-Nya-Ta party in three pagoda pass. They could pretend how they bravely passed thru 88 journey and sale their products to online, not us.We will never forgive them! No wonder, that's why, some people were beaten up at reunions all the times.
Zaw Tun Aung နောက်ပြီးမဲဆောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲက၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ခဲ့တာတစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ ထင်တယ်။
Hlaing Bwa မိုးဇော်အောင် ... အစ်ကို ဌေးတင့်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ခြောက်လကပဲဌေးနိုင်ကမစ္စကို ပြောဖြစ်ခဲ့သေးတယ် ... သူ့ ကိုအခုသည် လင့်ခ်ထဲကိုခေါ်ထားလိုက်မယ် ... ဌေးတင့် facebook ထဲမှာရှိတယ် -
Hlaing Bwa ဌေးတင့် facebook address: .... https://www.facebook.com/htayt
Lwin Thein ကိုဌေးတင့်ပါရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ ပိုပီးတိတိကျကျသိရတာပေါ့...တချို့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းပါရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူဆီမှာရှိတယ်ဆိုတာ ပြန်ပီးစုံစမ်းပေးပါမယ်။
Hlaing Bwa တင်လှ (၁၀၂) ကိုသတ်ခဲ့တဲ့ လှမြင့်သန်းဆိုတာလည်း မွန်က Cover ပေးပြီး နောက်ဆုံး US, Indiana မှာ။ ထွန်းမြင့် (RIT - 141) ကိုသတ်ခဲ့တဲ့ ချီးထုပ်ထွန်းထွန်းလည်း US မှာ .... (ငါတို့ က - ရင်ထဲမှာ မချိတင်ကဲ ခံစားနေခဲ့ရပြီး ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်း ဘ၀မှာငြိမ်နေခဲ့ရတာ ... ဒါပေမဲ့ (၈၈) တွေ အသက်တွေကြီးကုန်ပြီ - နောင်မျိုးဆက်တွေကို သိသင့်တာတွေသိအောင် အမှန်အတိုင်း အရှိအဖြစ် အတိုင်း အဖြစ်မှန်အတိုင်း ပြောခဲ့ရမှာပါ - ငါတို့ ရဲ့ အညတရ သမိုင်းကို ဘယ်သူကမှ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီးရေးမှာမဟုတ်ဘူး ... သည်မှတ်တမ်းတွေကို ငါတို့ ပဲ ထားခဲ့ရမယ် - (ဘယ်သူနစ်နာစေ လိုတော့ဆိုတဲ့ ဆန္ဒတော့မရှိဘူး .... အဖြစ်မှန် သမိုင်းမှန်ကို ငါတို့ အားလုံးမသေခင် တတ်နိုင်သလောက် ထားခဲ့ရမှာပဲ)
Kyaw Swar ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူတို့တွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ် ၊ ဒီလောက်လူမဆန်တဲ့ ကိစ္စတွေကိုဗျာ ၊လူအချင်းချင်းပဲ ဒီလောက်ရက်စက်တဲ့ အလုပ်တွေကတော့ တရားလွန်လွန်းပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့်ထောက်လှမ်းရေးပရောဂလည်း အနည်းအကျည်းတော့ပါတယ် ၊နေရာတော်တော်များမှာ သူတို့ စီစဉ်သွားတာတွေ တော်တော်များတယ် ။ဒီကိစ္စုကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ၊ ကျနော့်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိသေးတယ် ။ကျနော်ကငယ်တော့ အဲ့ဒီတုန်းကတော့မသိဘူး ။ အခုမှပြန်စဉ်းစာလာတာ ။ အစ်ကိုတို့ ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးတဲ့သူတွေဆီက ဗဟုသုတလိုချင်ပါတယ် ။ဖော်မယ့်ဖော်တော့ အစဆွဲပြီး အကုန်လုံးကို ဖော်စေချင်ပါတယ် ၊ ကျနော်တို့လဲ ဗဟုသုတရတာပေါ့၊ ဆင်ခြင်လို့လည်းရတာပေါ့ ။ထောက်လှမ်းရေးထင်တိုင်းကြဲခဲ့တာတွေရော ဦးနှောက်မရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခဲ့တာတွေရော . .။ ကျနော်ကတော့ လက်နက်ကိုင်ဝါဒီကို အာမပေးဘူး ။ လူတွေပဲဗျာ ။ လက်နက်ရှိတဲ့လ၊ အင်အားကြီးတဲ့လူတွေူကတော့ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်နိုင်တာပဲ ။ အခုလက်ရှိအမြင်တိုင်းပြောတာပါ ၊ ၈၈၈၈ မှာ အရွယ်ရောက်ကျောင်းသားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုကို အာမမခံနိုင်ဘူး ။ပြန်ဖော်ထုတ်ပြီး တရားတဲ့နည်းနဲ့ အမှန်တရားဖော်ဆောင်ဖို့က ကျနော်တို့မှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ် ။ရှဲသွားပြီး လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ဦးမယ်ဗျ ။
Htay Tint ဌေးနိူင် အသတ်ခံရတာ သက်သေ မပြည့်စုံသေးဖူး။ မိုးသီး အပါအဝင် ၅ယောက် အုပ်စုက မယ်နပလောကနေ ABSFD ဗဟို စခန်း ကနေ ကရင်နီကို ပြောင်း လှေထွက်ခါ နီးမှာ မှာ သတ်ပစ်ခဲ့တာ ။ သတ်ခဲ့တဲ့ အုပ်စုတွေက လူညီပြီး ကျွန်တော်တို့ ရေးနေတာတွေကို ဟားတိုက်ရီနေကြတယ်လို့ပြန်ပြောပြတယ် ။
Wynn Aung we do need to find out! people who are fighting dictatorship and becoming dictator themself!
Htay Tint ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းတာက ဒီကိစ္စကို သိတဲ့ ဝင်းနိုင်(ဆေး- အရှည်ကြီး) က မီဒီယာမှာလုပ်နေပြီး ပိတ်ထားတယ် ။ကိုကိုဦးက သူကိုယ်တိုင် ရှင်းမယ်လို့၁၉၉၃ နဲ့၂၀၁၁ မှာ သဘောထားပေးထားတယ် ။
Htay Tint မိုးသီး မင်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး သမိုင်းဆိုတာ ဌေးနိူင်။ လှဝင်း အလောင်းနဲ့ အတူ ပုဆိုး အုပ်ပြီး ထားခဲ့လို့ မရဖူးကွ ။ မင်း ဥက္ကဌ ဖြစ်ခဲ့တုံးက မင်း အာဏာ အုပ်စုတွေနဲ့ဖုံးဖိ ထားတယ်ဆိုတာ မင်းလဲ အာဏာရှင် တယောက်ဘဲ ။ မင်းတိုက်နေတဲ့နဝတ နအဖ နဲ့အတူဘဲ ။ နောင်လူငယ်တွေ အနာဂါတ် အတွက် သမိုင်း အမှန်ရေးပြီး ဝန်ခံ သင့်ပြီ ။
Hlaing Bwa မိုးသီးက သူ့ ဖာသူ ဒေါ်စုနဲ့ ပတ်သက်တာတွေရေးပြီး အားလုံးဝိုင်းဆဲကြလို့ငါ့အကောင့်ထဲကနေသူ့ ဖါသာသူထွက်သွားတယ် (ငါနဲ့ တော့မပတ်သက်ဘူး) ဒါပေမဲ့ အစည်းအဝေးတခုမှာတော့ တွေ့ နေကျပါ ... သည် အပတ်လည်း တွေ့ ဦးမှာပါ .... မင်း Message ကို သူကိုတိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားအထိရောက်အောင် (သူဆီကိုရောက်အောင်) ငါအရောက်ပို့ လိုက် မယ် -
Pann Si Oo အတိတ်က ကံကြောင့် ဒီဘ၀မှာဘဲ သူကောင်းစားမှာပါ...... နောက်ဘ၀ မှာတော့ သူအ၀ီစိ ငရဲမှာ ဂျိုးကပ်မှာပါ...
Htay Tint ဒီကောင် ငါ့ညီကို သတ်ပြီး ငါ့ ကိုပါ မဆလ ထောက်လှမ်းရေး သတင်းပေးလို့ ပြောတာ မောင်မောင်စိုး နဲ့ တခြားသူတွေ ပြန်ပြောပြတယ် ။၁၉၉၃ နောက်ပိုင်းက စပြီး မိုးသီးလူတွေ ငါ့ ကိုပါ တနာမည်ပျက်အောင် လုပ်ခဲ့တာ ။ တချိန်ထဲမှာဘဲ မြန်မာထောက်လှမ်းရေး လို့ယူဆသူတွေကလည်း မိုးသီးကို ချဖို့ငါ့ကို တည်ကြက်လုပ်ပြန်တယ် ။ တော်သေးတာပေါ့ ။ ငါက လွတ်လွတ်နဲ့မှန်မှန်နေခဲ့လို့ ။
Soe Win Maung Soe တောထဲကလူတွေလဲဘာလုို့သူတုို့ကိုလက်ခံထားခဲ့ကြတာလဲမသိဘူးနော် ငါလို ဗဟုသုတနဲ ကြလုို့နေမှာ :( အရင်ကသိခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲ သံချောင်းဆုိုတဲ့လူကုိုတွေခဲ့ဖူးတယ်ထင်တာပဲ မမှတ်မိတော့ဘူး
Htay Tint Soe Win Maung Soe ရေ မိုးသီး တောထဲကို ၁၉၉၀ ရောက်ခါစက ကိုယ် မဲဆောက်က ၃ ထပ်ABSDF ကျောင်းသားရုံးမှာ ။ ရေဒီယိုကမရှိ ။ ယူဂျီတွေက အဆင်းဘဲရှိတယ် ။ အတက်မရှိသေးဖူး။ လူ့ ဘောင်သစ်ပါတီက ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆိုပြီးဝင်လာတာ ။ သန်းဝင်းတို့ ရကသ အုပ်စုနဲ့အသိဟောင်းတွေဆိုလို့လက်ခံကြတယ် ။ကျောင်းသားပါတီ ဦးဆောင်ခဲ့သူတဦးအနေနဲ့ လေးလေးစားစား တောထဲက ကျောင်းသားတွေအားလုံး လက်ခံခဲ့ကြတယ် ။ ပြည်တွင်းက နာမည်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားတယောက်ကို တောထဲက ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ မှာ ခေါင်းဆောင်နေရာပေးသင့်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်နဲ့ မိုးသီး မင်းသမီးစခန်း ရေဆိပ်ဘေးက ဝါးဖေါင်တွေပေါ်မှာ တညနေက သဘောတူခဲ့ကြတယ် ။မိုးသီး ABSDF ဗဟိုကော်မီတီဖြစ်ရေးကို ဝိုင်းကြိုးစားပေးခဲ့တယ် ။
Htay Tint တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားနေကြတာ ။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး လူသတ်မိန့် ဝင်လာတာလဲ ။
Soe Win Maung Soe အကုိုတုို့တုန်းလူတွေကုိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး 2003 နောက်ပုိုင်းမှာ ကျွန်တော်ရွာပြန်သွားပြီး ဒီလူတွေ တောထဲဆက်ရှိနေကြသေးတယ် ကျွန်တော်လဲ ဒီအကြောင်းတွေမသိခဲ့ပါဘူး ဒါကြောင့်မေးကြည့်တာပါ အထင်မလွဲပါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ စစ်ဆောင်ပန်းနားမှာနေတာများပါတယ် တခါတလေမှရွာပြန်ချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပုိုက်ဆံလုိုကြတယ် 81 ဝယ်ပေးပါအုန်းဆုိုမှ မြန်မာပြည်ထဲလာဖြစ်ခဲ့တာပါ 81 = China made ka 47
Moe Zaw Aung The sad thing is, Ko Tin Hla had died on my hand, when I, Ko Yin Aye, and Ah Nga lay were tried to send him to Sangkhla Buri hospital after accident in cinema at three pagoda pass.
Ko Tun Tun Aung’s accident investigation commission was led by Ko Myo Win, former ABSDF-GS from Minthamee Camp, and we still need to know what facts they have found in there. I only learned Ko Htay Naing’s accident in briefly from somebody. Those fallen comrades are heroes to me and both act like big brothers who protected us in the jungle. I miss them deeply even it was very long time ago in Thae Bo Bow area. ABSDF-Reg.205 hadacrisis and was on full alert. I, Ko Htay Naing and others were patrolling for the camp of Reg.205 on those nights which were one of darkest moments in there, not knowing what would happen to us. After ABSDF‘s second conference, I hadachance to meet Ko Htay Naingacouple of times in Mae Sot and BKK then he suddenly disappeared. No matter how awful it was, we still deserved to know the ugly truth! It would definitely assist our healing, and help us have final closure.
Soe Win Maung Soe အမ လူသတ်တဲ့ ခေါတ်ကုန်ပြီး ဘယ်သူ တရားပျက်ပျက်ကုိုယ် မပျက်နဲ့တဲ့ အမေပြောဖူးတာ မှတ်မိနေသေးတယ် အမ သာအစုိုးရဖြစ်ရင် မတွေးဝံ စရာပဲဒီ စိတ်နဲ့ဆုို ကျွန်တော် lavender မှာနေတယ် singapore လာပြီး ကုိုယ့်ထမင်းကုိုယ်ရှာစားနေတာ စစ်ခွေးလဲ မဟုတ်ဘူး ဒီမုိုခွေးလဲ မဟုတ်ဘူး အရင်က စစ်ခွေးပဲ ရှိခဲ့တာ အခု ဒေါ်စုကုို ပါပြန်ကုိုက်တဲ့ ဒီမုိုခွေးတွေပေါ်လာတာတော့စိတ် မကောင်းဘူး အမကုိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမုိုခွေးဆိုတာ
Sai Maungmaung စိတ်ဝင်စားစရာ ဇတ်လမ်းတွေပါလားဗျာ.. ကိုလှိုင်ဘွား ပြောသလို .... (၈၈) တွေ အသက်တွေကြီးကုန်ပြီ - နောင်မျိုးဆက်တွေကို သိသင့်တာတွေသိအောင် အမှန်အတိုင်း အရှိအဖြစ် အတိုင်း အဖြစ်မှန်အတိုင်း ပြောခဲ့ရမှာပါ - ငါတို့ ရဲ့ အညတရ သမိုင်းကို ဘယ်သူကမှ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီးရေးမှာမဟုတ်ဘူး ... သည်မှတ်တမ်းတွေကို ငါတို့ ပဲ ထားခဲ့ရမယ် - (ဘယ်သူနစ်နာစေလိုတော့ဆိုတဲ့ ဆန္ဒတော့မရှိဘူး .... အဖြစ်မှန် သမိုင်းမှန်ကို ငါတို့ အားလုံးမသေခင် တတ်နိုင်သလောက် ထားခဲ့ရမှာပဲ)..... ရေးနိုင်သူများ ရေးသားဖော်ထုတ်ပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ... အဲဒီတုန်းက ရာထူးအာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး အချင်းချင်းဖိနှိပ်ခဲ့ကြတာကို နောင်လာနောက်သားများ သိရှိစေရန် စေတနာ အရင်းခံနဲ့ ဖော်ပြပေးစေချင်ပါတယ်.... ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ စိတ်ဝင်စားစရာနဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံး သမိုင်းဆိုရင် မြန်မာပြည် ပြည်တွင်းစစ် သမိုင်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျာ...
Soe Win Maung Soe အကုိုပြောတဲ့ 90 တုန်းက ငါကကလေးရှိသေးတာ ငါ့အမကတော့ထောင်ထဲမှာ အဲဒီတုန်းက အဖေ ကဝန်ကြီးများရုံးမှာ ပြီးတာနဲ့အဖေလဲ နယ်ပြောင်းခံရတော့တာပဲ
Soe Win Maung Soe အမက တောသွားခုိုရင်းလမ်းမှာ အဖမ်းခံရတာ အဖေ ကျေးဇုး ငါတုို့မောင်နှမ မှာမနဲ ဘူး အမလဲ အေ ဖသူငယ်ချင်း ရေကြည်အုိုင်က ဗုိုလ်မှုးတစ်ယောက်ကယ် လုို့ ငါတုန်းကလဲ နေပြည်တော် ကသူ့သူငယ် ချင်းကိုသွားတွေ့ခုိုင်းလုို့ အုိုကေနေကြတာ
Zaw Thura မြောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်အပါအ၀င် ကျောင်းသားလေးယောက် အသတ်ခံရတော့မယ့်ဆဲဆဲ သာယာဝတီက ဦးကျားကြီး အာမခံပြီး လာရောက်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက် လွတ်မြောက်ခဲ့တာပါ..အဲ့ဒီတုန်းက ဘန်ကောက်ပိုစ့်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပုံတွေပါလို့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုသိရပြီး လိုက်လာတာပါ...သာယာဝတီထောင်ကို ရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတိုင်း ဦးကျားကြီးကို သိပါတယ်..သက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်..သူ့ သား ကိုကျော်နိုင်ဦး ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အတူ လွတ်မြောက်လာခဲ့သူပါ တစ်လောတုန်းက သာယာဝတီမှာ ဆရာစံ နှစ် ၈၀ အမှတ်တရပွဲကို ဦးဆောင်လုပ်ခဲ့သူပါ...ထင်းခွေမကြုံရင် ရေခပ်အကြုံကို ပြည်တွင်းက စောင့်မျော်နေပါတယ်..။
Kaung Myat Min တော်တော် အော်နှလုံးနာဖို့ကောင်းတဲ့ ဇါတ်လမ်းတွေရှိခဲ့တာပဲ။
ပြည်တွင်း ကျောင်းသားဘဝတုန်းက ငါ့တို့အကိုတော်တွေ တောခိုတဲ့အကြောင်း
ပြောမဆုံပေါင်းတောသုံးတောင်နဲ့ ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထအောင် ရင်ဘက်သူရဲကောင်းတွေလို့ ထင်ခဲ့ဘူးတယ်။ အခုတော့ ကျနော်တို့ ရွံမုန်းတဲ့ စစ်တပ်ထပ်တောင် ရွံဖို့ကောင်းတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ယုံကြည့်လို့မရတဲ့
Soe Win Maung Soe ဆုိုလိုချင်တာက သွေး အသက် ဘဝ အချိန်တွေ ပေးဆပ်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ လူတွေ ဘဝ တွေကိုစာ နာပါ အရင်လုို အကြမ်းဖက်တဲ့ လမ်း ပြန်မလုိုက်ချင်ပါနဲ့ ငါတို့ မိသားစုမှာ နှစ်ယောက် ငါနဲ့ ငါ့အမ လုပ်ခဲ့ ကြပြီး ပြီ ငါတုို့ အဖေ့ ကျေးဇူးနဲ့ အုိုကေနေတာ မ အိုကေပဲ ထောင်ထဲ သေသွားတဲ့ လူတွေ အများ ကြီး ပဲ ဒါကြောင့် ပါ တမျိုး မထင်ပါ နဲ့
Wynn Aung Hello 88! this is time to find out, On the way to genuine Democracy! we do need to find out! people who are fighting dictatorship and becoming dictator themself!
Aye Thant Kyu Who remove my comment ,I wrote about of Killer BBC Aung Naing Brother in law ,former NLD (L A)JPN Secretary ,Ko Thant TIN SINT and His wife Story.
ABSDF တောထဲက အရှုပ်တော်ပုံကတော့ကွာ....ပြောချင်ဘူး...ကျနော်(၁၉၉၇)တုန်းက မဏီလွိုင်ကန့်ကို သူငယ်ချင်းရှိလို့ လာလည်ဖူးတယ်....စစ်ဗိုလ်နဲ့တူလို့ ထောက်လှမ်းရေး ထင်နေကြတာ...နောက်တော့ အဲဒီထဲက ထားဝယ်သားတွေနဲ့ စကားပြောလို့ ထားဝယ်မှန်းသိသွားမှ ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ယုံသွားတယ်...(နို့မို့ဆို လျှောနိုင်တယ် အဲဒီကန့်ထဲမှာလည်း ခဏခဏ လူသတ်မှုဖြစ်တယ်တဲ့)...ဘာမှန်းလဲတိဘူး...ဗမာက ဗမာ၊မွန်ကမွန်တန်းလျား...ကရင်က ကရင်စု ခြုံတောထဲမှာ ကရင်စတိုင် တဲဆောက်ပြီးနေကြတယ် တအုပ်စုနဲ့ တအုပ်စု သိပ်မတည့်ကြဘူး ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေကြတယ်....အဲဒီမှာ ထားဝယ်သားက ကြားက ဟိုအုပ်စုနဲ့လည်းရော ဒီအုပ်စုနဲ့လည်း ရောလို့ရတယ်...မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ဖီးချိုင်ဆိုင်မှာ ဘီယာသောက်ကြပြီ...နိုင်ငံခြားကို ထွက်ရမယ့် အုပ်စုတွေ နှုတ်ဆက်ပွဲနဲ့တိုးရင်တော့ ဝါးတီးပွဲပဲ့....နောက်ဆုံးတော့ (ABSDF)မှာ ခေါင်းဆောင်မကောင်းလို့ပဲ့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်....
Soe Win Maung Soe
အခု အစုိုးရ သမတ အစုိုးရ ဆုိုပြီး နာမည်ခံ ထား ပြီးတော့ မီဒီယာ တွေ ကလဲ မတရားကောင်း ဆုိုတော့ ငါတုို့ အနုနည်း နဲ့ လုပ်လုို့ ရတဲ့ အချိန်ကောင်း ပါ ၊ ပြီးတော့ အရင်ချိန်တွေကပေးဆပ်ခဲ့ ကြတဲ့ လူတွေ ဘုန်းကြီးတွေ ကုိုလေးစား အမှတ်ရလျှက်ပါ များများရေးပေးပါ လူငယ်တွေ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ ကြတယ် ဆုိုတဲ့ သမုိုင်း ကြောင်းသိ မှနောက်နုိုင်ငံ ရေးမှာ ဆောင်ရန်ရှောင် ရန်တွေ သိကြမှာ ပါ ဒါဇတ် ရှုတ် မဟုတ်ပါဘူး လူငယ်တွေ အတွ က်နုိုင်ငံရေး ဝမ်းစာ ပါ ကျေးဇူးတင်တယ်ရေးကြတဲ့လူတွေကုို
Soe Win Maung Soe Yes who remove ma aye thant kyu comment , don't do like that , even ko khine zaw write down should not to remove .
Aye Thant Kyu Soe Win Maung Soe 1998 ,I met Kiler Aung Naing In Japan,2001,I was arrested in immigration center ,one man told me the story of Killer Aung Naing and His sister father is MI Captain,and the same NLD(LA)JPN. Former Secretary Ko Thant Tin Sint Is the spy of M I.I wrote Full Story and who removed my comment.
Soe Win Maung Soe It not fair who remove it ? Answer me who ? This is democracy , I don't like to do this . Even this is wrong storie , must let to write down this comment .
Boon Myo Myo ကျွန်တော်လည်း မနီလွိုင်ကို ၁၉၉၇ ကျမှ ရောက်ဖူးပါတယ် ။ ရောက်ရောက်ခြင်း လုံခြုံရေးစစ်ဆေးချိန်နဲ့ တွေ့ လို့သတင်းပို့ လိုက်ရပါတယ် ။ ဘာသာစကား ယဉ်ကျေးမှု မတူသူတွေ သူ့ အစုနဲ့ သူနေကြပါတယ် ။ ကျောင်းသားတွေ မြန်မာပြည်ထဲပို့ တဲ့ စာတွေကိုင်ပြီး မြန်မာထောက်လှမ်းရေးတွေ ထိုင်းနိူင်ငံထဲကို ၁၉၉၄ မှာကထဲက ဝင်လာတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ၂၀၁၀ မှာ အိမ်က ညီနဲ့ ပြန်တွေ့ မှ အတိအကျသိရပါတယ် ။ ထောင်ကျော်စာရင်း ကျောင်းသားတွေထဲက မနက်မိုးလင်းရင် အရက်သောက်တာ လူအနည်းငယ်ပါ ။ စားရတဲ့ ထမင်းဆိုတာ သိမ်းထားရင် ၃ နာရီဘဲ ခံတယ် ။ သိုးသွားတယ် ။လက်ချိုးရေတွက်လို့ ရပါတယ် ။ လူသတ်မှုဖြစ်တာကလဲ ၃ မှုရှိခဲ့ပါတယ် ။ ရိုက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ် ။ အရက်သောက်တာတို့စကားနိူင်လုတာတွေကနေပြီး ဖြစ်ကြတာပါ ။ မနီလွီုင်စခန်းမှာ ကျောင်းသား စခန်းကော်မီတီ ဆိုတာ ရှိပါတယ် ။ ထိုင်း အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုထားတာပါ ။ စခန်းတွင်းမှာ နေထိုင်ကြသော လူတွေအားလုံး ထိုင်းဥပဒေ နဲ့ အညီနေထိုင်ကြရပါတယ် ။ ၁၉၉၉ ဦးဇင်းမောင် အသတ်ခံရမှုမှာ ယနေ့ အထိ တရားခံ မရှိသေးပါ ။ အလုံပိတ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားစခန်းပြင်ပက ဘုန်ကြီးကျောင်းမှာ ပြင်ပက ကြေးစားတယောက် ပုဆိန်နဲ့ လုပ်ကြံခဲ့တယ်လို့ သာ မှတ်ချက် ပေးနိူင်ပါတယ် ။ဖေ့ဘုတ်မှာ ပြည်တွင်း လူငယ်တွေ ဝင်ဖတ်နေလို့ရေးပြတာပါ ။
May Myo လူသတ် တရားခံတွေ နဲ့ တော်လှန်ရေး ကို မရောထွေးမိကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ တကယ့်ကိုတော်လှန်ရေး အတွက် အနစ်နာ ခံ တိုက်ပွဲ ၀င်သွားတဲ့ သူတွေ ကိုပြန် မြင်စေချင်ပါတယ်။ တချိန်က တိုက်ပွဲတွေမှာ တကယ်တိုက်ခဲ့ တဲ့ ရဲဘော်တွေ အသက်စတေး သွားခဲ့ တဲ့ ရဲဘော်တွေ စိတ်ဓါတ်ကို ထိခိုက်စော်ကားစေတဲ့ စကားလုံးတွေ ရှောင်ပြီး သုံးစေချင်ပါတယ်။ ခြေမ မကောင်းခြေမ လက်မ မကောင်းလ က်မ ဖြတ်ကြပါ။ တကယ့် သူရဲ ကောင်းတွေ လည်းအများကြီးရှိခဲ့ ပါတယ်။
Aye Thant Kyu Ko Soe win maung Soe now o will write my own wall
တော်လှန်ရေးသူရဲ ကောင်းတွေ ကုိုဂုဏ်ပြု ရင် တော်လှန်ရေး
စားဖားတွေမကောင်းတဲ့ လူတွေ ကုို ရှုတ်ချလုိုက်ပါတယ် ကျွန်တော် ညကြ မှ pc နဲ့ ဒီဟာကုို ရှယ် ပေးလုိုက်ပါမယ် မွေးလာမဲ့ကလေးတွေကုိုလဲပြောပြမှာပါ ဒါပင်မဲ့ သူများကွန်မန့် ကုိုတော့ကျေးဇုးပြု ပြီး မဖျက်ကြပါနဲ့
Aye Thant Kyu
Error-I will write my one wall .you read it my story .2001 September to 2001 october3-rd ,I was Arrested in Immigration Center of Japan .Who made ,NLD (L A)JPN,CEC,
They said I am Spy ,
My Husband and sin were Political prisoners in the jail,They wrote the letter to JPN Immigration and Arrested me.
Husband was 11.5years
Son was8.5 years in the jail .
Before I write on the freedom Burma wall ,KiA Khin Mg Oo removed my all comment .
Now you read in my wall about of killer Aung Khine Story and KIA Khin MgOo How to write to me .
Ko Ko Htay တော်လှန်ရေုးကိုခုတုံးလုပ်ကာအာဏာရူးပြီးလူမဆန်စွာယုတ်မာရက်စက်ခဲ့ကြတဲ့.မြောက်ပိုင်း အေဘီအက်စ်ဒီဖက် မှသူများနိုင်အောင်၊အောင်နိုင်၊ထွန်းအောင်ကျော်၊သံချောင်း၊မျိူးဝင်းအကြောင်းအဖြစ်အပျက်အစုံအတွင်းရေးများမကြာမီလူတိုင်းဖတ်ကြရတော့မည်။
Samu Rai အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို ပိုစ့်တခုအနေနဲ့ဖော်ပြပေးရင် နောင်လာမယ့်လူငယ်တွေအတွက် သမိုင်းဆိုတာကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်.... အမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားပြီး နောင်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် တာဝန်တစ်ခုပေးအပ်ခဲ့တဲ့သဘောပေါ့
တော်တော်လေးကိုတွေးခေါ်မြော်မြင်မှူ့ မရှိကြတာဘဲ၊ ဖွကြပါပြီ၊ လူငယ်တွေဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်ဖြစ်အောင်၊ ၈၈မျိုးဆက်လို့ ပြောနေသော၊ ရလုပ်လား၊လုပ်ရလားအသက်ကြီးပြီအချိန်စီးကြတော့၊ နိူင်ငံရေး၊တော်လှန်ရေးလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရက်နဲ့ ငါကတော့ခံထားရတယ်၊ မသေရင်ခံစားရမယ်။ သိနေကြတာဘဲ၊ ခက်နေတာက၊ လူထုအတွက်လုပ်သလိုလိုနဲ့ ငါအတွက်ဆိုတာဖြစ်သွားကြတာ၊ ဘာတော်လှန်ရေးမှမဟုတ်ဘူး။ ငါ့အတွက်တော်လှန်ရေးနဲ့ အများအတွက်တော်လှန်ရေးရောနေကြတာဒါဘဲ။ ရှက်သင့်တယ်၊ပြင်သင့်တယ်။ အနာဂါတ်လူငယ်တွေအထင်ကြီးနေတဲ့၈၈တွေ၊ ဖွတ်ထွက်မှတောင်ပို့ ကြီးဖြစ်နေကြတာ၊ နှမြောစရာကြီး၊ ဗြမ္မာဦးခေါင်းတွေဖြစ်နေကြပြီ။
Shwe Khay အမှန်တရားအတိုင်းဖြစ်ပါစေ။ ရက်စက်တတ်သူတွေလည်း အလှည့်ရောက်ပါစေ။ မဆိုင်ပေမယ့်စိတ်ဆင်းရဲလို့ ကျိန်လိုက်မိတယ်။
Zaw Tun Aung အိုကေလေ....အဲဒါဆို...၈၈လို့ နာမည်တပ်ထားသူတွေ၊ အားလုံးဝန်ခံသင့်တယ်။ သူခိုးပြေးမှထိုးကွင်းထတာ..< Htay Tint ) ရောအမှားမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။
Aye Aye Mon All are Killers in our Revolution because Freedom Fighters are killing with enemies by using Weapons. All Politicians are talking, issue statements and travelling around the world for killing to get Wins with Multi techniques.
Aye Aye Mon Mouth Killers
Aye Thant Kyu Now I write on my wall Killer BBC Aung Naing and relative and use NLD(LA)JPN FINANCE of true story. Please to see my wall,three times removed my comment in Freedom Burma Wall.Who made I Don't Know .
ကိုစိုးလေးလို ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်သူတွေ နအဖကို အဲဒီအချိန်ကထဲက
အခုထိ ခေါင်းဆောင်နေရာက တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲ ထင်ပါတယ် ။
အဆံမရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာတွေ သမိုင်းဝင် မှတ်တမ်းလုပ်ခဲ့လဲ
လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနဲ့၈၈အကျဉ်းတန် နှစ် ၂၀ သမိုင်းတပုဒ် ကို ဖြတ်သန်းမိပြီ ။
ပြည်တွင်းခေါင်းဆောင် ကိုသူရိန်က ပြည်ပအကူအညီနဲ့ 
ပြည်တွင်းကို ရနောင်းဘက်က ပြန်ဝင်ရန်လာခေါ်လို့ လိုက်သွားတာ
ဘန်ကောက် ရောက်ပြီး ရွာလည်ကာ ဘဝပျက်မလို ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။
ဝရဇိမ် စာစောင်( အေးပက်မှ ဆရာပေါကူညီပေးသူ) လူငယ်လေးများက ကူညီလို့ 
ထမင်းငတ်ပြီး လမ်းဘေးအိပ်တဲ့ ဘဝက လွတ်သွားပါတယ် ။
ပြည်ပရောက် မြန်မာကျောင်းသားများအဖွဲ့ ဖြစ်မြောက်ရေးမှာ ကူညီနေတုံး
ထိုင်းအစိုးရမှာ ထိုင်းမြန်မာ ဘာသာပြန်လိုနေတာနဲ့ 
တောင်းဆိုမှုအရ လုပ်အားပေးခဲ့ရပါတယါ ။
ခပ်တိုတိုပြောရလျှင် ဒုက္ခရောက်လာတဲ့တော်လှန်ရေးက ရဲဘော်တွေကို ဘန်ကောက်မှာ လှည့်ပြီးကူညီခဲ့ပါတယ် ။
နောက်တော့ မဟာချိုင်ရောက်ပြီး လူထုနဲ့ တသားတည်းနေပြီး လူထုကာကွယ်ရေးနဲ လူထုဦးဆောင်ရေးကို ၁၉၉၉ အထိတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်
Zaw Tun Aung အဲဒါ < Htay TinT ) ရေးထားတာ၊ဒါဘဲ < Sai Zaw > လာမကိုက်နဲ့ အမှန်ကိုဖြစ်၊စေခြင်တယ်၊အမှန်တရားကိုလေးစားခဲ့ရင်၊ နှစ်
Zaw Tun Aung http://htaytintnl.blogspot.com/2010/05/htay-tint.html
Kyaw Soe Win ဒီလိုရက်ရက်စက်စက်လူမဆန်အောင်သတ်ခဲ့၊သတ်ဖို့ကြိုးစားပြီး
စစ်အာဏာရှင်ကို စွန့်လွှတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊
တော်လှန်ခဲ့၊တော်လှန်ဆဲ ဆိုတာကိုတော့ အရောင်မှိန်မသွားစေချင်ပါ။
Zaw Tun Aung အခုဒီ post မှာဘဲ၊ အမှန်ကိုရှာရင်းသာဓုခံလူတန်းစားအခြင်းခြင်းကိုက်ကြတဲ့ပွဲလို့ ဘဲမြင်မိတယ်။ တစ်ကယ့်လုပ်ရပ်မှန်က၊ နှစ် ၂၀ ကြာစရာမလိုတဲ့ကိစ္စကြီးကိုကွယ်
Htay Tint Zaw Tun Aung ပြောတာ မှန်ပါတယ် ။ ဌေးနိူင်အသတ်ခံ ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ၂၀၁၀ သန်းဝင်းဆီက စာထွက်မှ ကျွန်တော်သိတာပါ ။
La Bya Tu Ko
ဒီလိုရေးသားမှုတွေ်free post မှာ လိူတိုင်းရေးတင်နိုင်ပါတယ် ကချင်မြေသတ်လိုက်တဲ့ တရခံတွေက မိုးင်္ညငိးက ကလားစိုးတင့်ပါကွာ သူကိုလည်း ပြန်သတ်လိုက်ပြီးပြီလေ ဘာလိုံ အရေမရ အဖတ်မရ စာတွေလာရေးနေတာလဲ သူတကယ်မှနရင် ဒီလိုတောင်မနေပါဘူး KIA ကလည်းဒါမျိုးကို ကြည့်မထားပါဘူး မင်းတို့လို ရပ်ကွက်က တေလေဂျပိုးတွေ ကျောင်းသာတွေနဲ့ တောထဲ ရောလာတာ အလွန်နာတယ် အာလုံးကိုတော့မဆိုလိုဘူး ဖြစ်နိုင်ရင် တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကြားထဲ အပြင်တင်မစောပါနဲ့ ရန်သူအအတွက် ဝှက်ဖဲ တချပ်ပေးလိုက်ရမယ်
Moe Zaw Aung ‎@ Zaw tun Aung, what is the point of attacking Ko htay Tint? I don't get it. In fact, it was us who helped Ko htay Tint. we helpedalot of people. I'm very glad to see his mention of gratitude for us during hard times in BKK. (ဝရဇိမ် စာစောင်( အေးပက်မှ ဆရာပေါကူညီပေးသူ) လူငယ်လေးများက ကူညီလို့ ထမင်းငတ်ပြီး လမ်းဘေးအိပ်တဲ့ ဘဝက လွတ်သွားပါတယ် ။)
Moe Zaw Aung Without KIA's blessing, it would not be happened the cruelty of the events in Northern Burma.
i met killer Aung Naing in Japan in 1998,He gave me his name card and he said ,he was the brother in law of Ko Than Tin Sint (former NLD(LA)JPN,Secretary).
When I was arrested in JPN IMmigration Center ,I Met one of the friend,he was the member of NLD (L A) JPN.He Wrotealett er to me ,in his letter ,his wife was5month Pregnancy and tomorrow morning went back to Burma .Now NLD Leader's U Tin Oo 's son Ko Than Zin Oo and Ko Than Tin Sint would be sent her to Burma with 3000dollars.
Who's for Comission Of Inquiry ( COI ) Former Military Dictator Than Shwe Groups (or) ABSDF( Moethee Zun )( Dr Naing Aung ) (Dr Aung Naing), Mark Famaner BCUK ( Burma Campaign UK ),Aung Din USCB ( US Campaign for Burma ),Dr Myint Cho ( Burma Campaign Australia ), Aung Htoo ( BLC ) ( Burma Lawyers Council ),KNU ?????????Why did Daw Aung San Suu Kyi refuse for Comission Of Inquiry ( COI )???????She dealed Quantana just for Inquiry??? She didn't accept whoever to prosecute.!!!!!!!!!!!!Why we didn't achieve to restore Democracy , Human Rights in Burma until now????????Why( inside) Burmese people didn't believe (outside) opposite groups ??????? What's for they're doing???????? Is it for( inside)people or own power,own profits?????????
Zaw Tun Aung တော်လှန်ရေးရဲဘော်ဆိုတဲ့စကား၊အရမ်းတာသွားတယ်။ မိုးသီးဇွန်နဲ့ နိူင်အောင်နောက်လိုက်လုပ်၊ အခြေအနေမကောင်းရင်ပြည်တွင်းပြန်၊ ဂွင်ကောင်းရင်တတိယနိူင်ငံသွား
ဒါကိုတော်လှန်ရေးလို့ ပြောနေရင်ရှက်စရာကြီး....လုပ်နိူင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလေးစားတယ်။ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်တော်လှန်ရေးသမားတွေ၊ ဆိုအထင်ကိုမကြီးတာ....ဒါလေးပါဘဲ....
All in the Name of Revolution
By AUNG NAING OO Saturday, February 13, 2010
Feeling sick from one of the innumerable viruses that often attacked us in the jungle, I had skipped that day’s military training.
It was about 9:30 in the morning and the sun was shining brightly. I was lying down listlessly in the front section of our allotted bamboo house, watching the traffic of occasional pick-up trucks and Karen villagers, soldiers and Thai traders passing by.
Suddenly,aman and woman apparently of Indian origin, both perhaps in their thirties, emerged from the corner of the road, where the rickety wooden jail was located. They were walking side by side. Two Karen soldiers in longyis (sarongs), with rifles slung behind their backs, walked closely behind them.
Fromadistance, it seemed to me to be an ordinary sight. The group appeared to be in no hurry and were walking slowly.
But as they came closer I saw that the man had his hands tied behind his back. The woman was carryingalittle baby.
Strangely, I could see that the rope binding the man's wrists was justathread of sacking, easily breakable. Even stranger, the man and the woman had small wooden placards dangling from their necks. The letters on the placards appeared to have been written in chalk.
I sat up and moved closer to the window foraclearer view of the peculiar sight. As the group came closer to the house, I saw that one of the soldiers hadalong and thin bamboo stick in his hand. He was hitting the couple with the stick and commanding them to say something. I heard him command “Shout!”
The man and the woman appeared to meekly respond every time the soldier hit them, but I could not hear what they were saying.
As the parade passed right in front of my window I read the words on the placards. The placard around the man's neck roughly read in blunt and impolite Burmese: “Don’t be like me who bunks with another man’s wife for free.” The message on the placard around the woman's neck was the same, with the exception of the words “with another woman’s husband.”
The couple mumbled the words, almost inaudibly, each time the Karen soldier beat them.
The small group walked past our house and the spectacle was so strange that I stuck my head out the window and watched them as they walked all the way up toalittle hill near the end of the road. I saw onlookers gather on both sides of the road as they reachedastretch with many shop houses.
I realized the severity of the parade and I felt sad. The man and the woman were probably on their death march. The situation in conflict areas had not changed in 30 years, I thought.
I recalled the talk I used to hear from my mother and grandmother at home—especially my grandmother, when she spoke about her experiences during the war, the crimes and punishments in times of conflict.
She recalled hearing of Sharia-like punishments meted out in some conflict areas during the 1950s and 1960s, especially whenever she heard the news on the radio about government clashes with rebels.
In those times, control over towns and villages often changed hands among various armed forces—the Karen, the communists, the army or others—as military fortunes and alliances shifted.
These armies imposed their strict rules on the helpless populations. “Justice” was swift and even petty crimes were severely punished.
In some cases, there were public executions anda“shame parade” would be organized for marital transgression before the alleged suspects were put to death as “examples” not to be followed. All in the name of revolution.
I felt uneasy and could not forget what I witnessed. So I told my friends about it. They were surprised and we all got increasingly curious about the fate of the couple.
The next day I questionedasoldier at the customs office. “Oh, the Muslim couple?” he replied inamatter-of-fact tone. “Thu Myar Thaat Like Pyi”—loosely translated as “Someone killed (him/her/them) already.”
I was so shocked that I forgot to ask about the baby. I wondered if their unlawful liaison was so heinous that they deserved to die. Then I felt frightened. Unconsciously perhaps, it was the first time my self-doubt about the revolution began.
That was the day I learned for the first time the term used for summary executions in the jungle—“Thu Myar Thaat Like Pyi.”
Not long afterwards,aman I used to play soccer with suddenly disappeared.
He was an adopted son of Col Taw Hla, the commander of the Karen army’s7th Brigade.
I discovered that the missing man, alsoaMuslim, had been unable to repay his debts on time to the commander of the Thay Baw Boe area, and had been executed.
To this day, I do not know whether there were other charges laid against him that may have been punishable by summary execution. But the act was extremely brutal. And everyone knew who ordered him killed. No action was taken against the perpetrator. I did not know if even Col Taw Hla lodgedaprotest against the culprit.
During my years in the jungle and later, I was to hear time and again that sentence“Thu Myar Thaat Like Pyi.”
All in the name of revolution and attempts to put down revolutions. Armies on all sides of the conflict stamp their authority and strict rules on the populations. This stems perhaps from an inherent military mindset, but the cases I have witnessed and heard about in Burma go to the extreme.
Atrocities are committed on all sides in the conflict in Burma. Only the degree of abuses may vary from time to time, from area to area and commander to commander. Strict rules are applied and punishments can be lethal—sometimes for offences that never deserve death sentences.
Evenaregiment of the All Burma Students' Democratic Front (ABSDF) located on the Salween River ignored the organization’s own laws and instead copied the Karen style “justice of the revolution” when the wife ofafront line soldier slept withacomrade at the base.
According to local Karen lore, the life ofasoldier who goes to war will be lost if his wife commits adultery during his absence.
The ABSDF case might have been an example of this belief. Whatever the cause, someone lost his life because ofatransgression that could have been dealt with differently.
After seeing the Muslim couple humiliated and driven to their deaths, I joined other opponents of jungle style justice in condemning the ABSDF commander who ordered the draconian punishment.
All these killings have political consequences – even the “shame” parade I witnessed some 20 years ago. They eventually became one of the issues that were hotly debated at the ABSDF Congress in 1991 and which contributed to the split of the movement.
Aung Naing Oo left Burma after the 1988 uprising and went to Thailand, joining the All Burma Students' Democratic Front and becoming the organization’s longest serving foreign affairs secretary. He was camp secretary of the Thay Baw Boe camp, Karen State and head of the "Jungle University." Based now in Thailand, he writes about Burmese politics.
Moe Zaw Aung Spinning the story!Main theme is," extrajudicial killings" I feel pretty good for unloadingalittle bit.
သံလွင် ရရစ် အကိုတို့ ကွန်မန့်တွေကဗဟုသုတအများကြီးရလိုက်ပါတယ် အဲဒီသမိုင်းကိုပြန်ရေးရင် ကောင်းတာရော ဆိုးတာပါ အတည့်အလင်းရေးသင့်ပါတယ်
Aye Thant Kyu All ,now I write comment on my wall because this is true history ,please read on the FB,my wall17/12,18/12 20/12 -3 Times removed by who ,Why do?
ကို Hlaing Bwa နဲ့ တကွ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ အခု ဗမာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းသားတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကိစ္စ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့တကွ ဘယ်သူတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူတွေ မတရားစွပ်စွဲခံခဲ့ရတယ် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ပေါ်လာပါပြီ။ အလားတူပဲ ဗမာပြည် တောင်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ဖော်ထုတ်ဖွင့်ချရေးသားကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
myanmar express မှကူးယူဖော်ပြပါသည်